I-iWatermark Pro Manual Mac kunye ne-Win (i-US) iphepha | Plum emangalisayo
Uncedo lweMac nophumeleleyo (US)
iWatermark Pro yinguqulelo yamva nje yeWatermark yeMac kunye yeWindows. I-iWatermark yeyona nto 1 yewermarking yesicelo seMac, Windows, iPhone / iPad, kunye ne-Android. Ilungelo lokushicilela ngokukhuselekileyo yonke imifanekiso yakho ngetermark ebonakalayo ngaphakathi kwemizuzu. I-iWatermark Pro sisixhobo esibalulekileyo kubafotayo nakubani na onekhamera yedijithali, iingcali okanye abaqalayo.
I-iWatermark sisixhobo esikhethekileyo kwimifanekiso ye-watermark. Isebenza ngokugqibeleleyo, ngokukhawuleza, ngokulula kwaye kuyabiza kakhulu ukuyisebenzisa kunePhotoShop. I-iWatermark yenzelwe ngokukodwa ukubonwa kwe-watermarking.
I-iWatermark Pro yenziwa nguMark Fleming noJulian Miller. Umsebenzi wobugcisa obhalwe nguMichel Zamparo.
Ngaba ungathanda ukuguqulela iWatermark Pro kulwimi lwakho lwenko? Qhagamshelana nathi.
UBALULEKILE: Le ncwadana yeyenzelwe iMac kunye neeWindows. MnaIzinto ezingumxholo ziphantse zifane.
Itheyibhuli yazo zonke iiSoftware zeWatermark
Igama kunye noLwazi oluthe kratya
IMac iWatermark IMac 10.9-10.15 umxokozelo 2.5.10 ikhonkco
Windows iWatermark Pro 7, 8.1 okanye u-10 + umxokozelo 2.5.28 ikhonkco
Iinguqulelo ezindala zeWatermark Pro zeMac & Win
Ngonxibelelwano lokukhuphela kunye neemfuno zenkqubo
I-OS kunye neKhonkco loLwazi
IiMacici zaBadala zaMac
I-Intel Mac OS X 10.8-10.14
I-Intel Mac OS X 10.6-10.11
I-PPC / Intel Mac OX 10.5
IMac 10.4, 10.5 okanye i-10.
Inguqulelo yeWindows IWatermark 3.1.6
IWatermark 2.0.6 I-WIN XP okanye ngaphezulu
Iimpawu zedrowa esetyenziswe phantsi kwelayisenisi ukusuka Isoftware yeeBar Bones, Inc. Benza isoftware enkulu.
Ikhowudi ye-MAAttachedWindow ngu-Matt Gemmell.
I-iWatermark Pro ixabisa i- $ 30. Emva kokuyizama nceda uye kuthi ivenkile ukuthenga. Ukungenisa ii-watermark zakho zangaphambili ezivela kwiWatermark kwi-iWatermark Pro yiya kwithebhu ephambili sebenzisa iqhosha lokungenisa ukuze ulayishe iiwatchark ezindala kunye noseto.
Kwimibuzo kuqala, jonga incwadana yemigaqo kwaye ukuba ayiphenduli uyandwendwela inkxaso phepha.
Ukuba unengxaki yokubhalisa cofa Nalu ulwazi. Ukuba oko akuncedi ukuya kwi inkxaso phepha.
Uluhlu lweZinye zeempawu
I-iWatermark Pro iyimpumelelo kwi-iWatermark kunye nokubhala okugcweleyo okusebenzisa i-Cocoa, i-Xcode, kunye netekhnoloji ye-Apple yamva nje. I-iWatermark Pro yeyona nto ibaluleke kakhulu ye-watermarking app.
Inani leentlobo zeWatermark 12. Ngamnye uluncedo kwinjongo eyahlukileyo. Ngaphezulu kwayo nayiphi na enye i-app.
Iindidi zeWatermark Isicatshulwa, i-Bitmap, i-logo, isityikityo, iVector, iiLayini, i-QR, Umbhalo kwi-Arc, Isibhengezo sombhalo, umda, iMetadata kunye neStegomark
Ubuninzi beefoto Umda (usekwe kwimemori)
Iimpawu zamanzi ngaxeshanye 1, 2, 3 okanye ngaphezulu
isantya I-4x okanye ngaphezulu ngokukhawuleza, i-64 bit
Ukusebenza kweParadise Aware Ukusetyenziswa kwemisonto emininzi ngemeko emininzi ye-CPU / GPU's
I-AppleScriptable (Mac kuphela) Ewe, kubandakanya izikripthi kunye nemenyu ye-script
Ulwandiso lweShell yeWin Explorer Cofa ekunene ukuze usebenzise iiwatchark ngqo.
Iiprofayili zombala Sebenzisa iiprofayili ezikhoyo nezikhethwayo
Ifolda yokukhupha Iisethingi ezili-10 zokukhupha iziphumo
Uhlobo lwefayile yokufaka I-RAW, JPG, PNG, TIFF, GIF, DNG, PSD
Iindidi zefayile zoPhumo I-jpg, i-png, iirhafu, i-psd, i-bmp, i-jpeg 2000, clipb
Qala kuqala Ewe, kwaye wabelane ukusuka kwi-preview yewindows
Ukutshintsha ubungakanani kwefoto Iindlela ezi-6 eziphambili
Ngenisa iiVelimitha Ewe, ukusuka kuMac okanye kwiWin version
Amathumbu aphuma ngaphandle Oovimba okanye babelana ngeMac okanye kwiWin version
Hlela ii-Watermark Advanced (amanqaku amaninzi amaninzi)
Isixhobo sokuhambisa amanzi Cwangcisa, hlela, tshixa, jonga kuqala, wabelana
IMetadata (XMP, IPTC) I-XMP kunye ne-IPTC eyandisiweyo
Yongeza / Susa iMetadata IPTC / XMP / GPS
Shumeka iMetadata eWatermark IPTC / XMP / GPS
Iimpawu zeMetadata njengemanzi I-IPTC, iTage, iGalelo leFayile, Exif, GPS
I ziphumo zonke ezo nokunye ...
Indawo yeWatermark Beka ngokutsala okanye xy
Isikali seWatermark Okwenziweyo, ethe tye kwaye nkqo
Ifomathi yeWitermark yokuBhala Ifonti, ubungakanani, umbala, ukujikeleza, ukucaca, isithunzi, umda
imvelaphi umbala, opacity, ubungakanani, umda, isithunzi, ukujikeleza
Nceda Kwi-Intanethi, kwimixholo kunye neenkcukacha
Iikhowudi zeQR njengeeWermark Yenza iikhowudi zeQR zisebenzisa iiwatchark
Iimpawu zeCreative Commons Watermark Yongeza ngokulula nayiphi na i-watermark
UkuKhangela okuKhawulezayo Ibonisa ulwazi lwe-watermark oluhanjiswa kwelinye ilizwe
Isebenza ngazo zonke iikhrawuza zeZithombe ewe
Rhweba ngaphandle kunye nokwabelana Backup, wabelane watermark kwezinye izixhobo zakho kunye nabahlobo.
Kutheni usebenzisa iWatermark Pro ngaphezu kwezinye iiNkqubo
I-iWatermark ayibizi kakhulu, iyakhawuleza kwaye ilula kune-watermarking kuneFotohop ngoba yayenzelwe ngokukodwa ukubukwa kunye nokuhambahamba kwabathwebuli beefoto abaziingcali.
I-iWatermark yenzelwe iMac, Windows, i-iOS, kunye ne-Android. iWatermark Pro. Ukwabela ii-watermark phakathi kwalezi zinhlelo zokusebenza kunokwenzeka ngo-2017
Iindidi ezili-11 zewermark. Olunye usetyenziso lune-1 okanye 2 kuphela.
I-iWatermark inokuthiya ngokutsha iibatch zeefayile, iifayile zokufaka zokucoca, kunye nokubuyisela ubungakanani beefayile zeefoto.
I-iWatermark isebenza kwi-RAW imifanekiso engafanelekanga.
I-iWatermark inokongeza okanye isuse ulwazi lwe-IPTC / XMP ngexesha lokulungiswa kweebatch zeefoto.
UBALULEKILE-ngeWatermark ungasebenzisa iifoto zezisombululo ezahlukeneyo kunye nolwakhiwo kwi-batch kwaye ugcine i-watermark kwifoto nganye ijongeka ngokufanayo ngenxa ye UkuCanda isixhobo. Isikali sithetha ukuba i-watermark inokuthatha ipesenteji yobubanzi ngaphandle kokungqinwa okanye ukujongwa komfanekiso ngamnye.
I-iWatermark inomhleli we-watermark onobuchule obunokwenza isicatshulwa, isicatshulwa se-arc, isibhengezo sesicatshulwa, umzobo, umzobi, umgca, i-QR, imethadatha kunye nokuguqula ubungakanani beewatch.
I-iWatermark inokwenza i-watermark ebeka i-IPTC / XMP idatha ngexesha ngalinye elisetyenziswa kunye okanye ngaphandle kwe-watermark ebonakalayo. Ilungile kwimibutho yeendaba.
I-iWatermark ikhawuleza kakhulu ebaluleke njengoko ubukhulu befayile kunye nokulungiswa kwebatch kuyaqhubeka nokukhula.
iWatermark igcina idathabheyisi yazo zonke iiwatchark ezinokusetyenziswa ngokuchofoza.
Kukho izicelo ezinje ngeFotohop ezinokubona umfanekiso kodwa iWatermark inomphathi we-watermark onokulandelela amakhulu eewatch. Umphathi ukwavumela ukukhiya / ukuvula, ukufaka i-IPTC / XMP, ukukhangela, ukuphinda igama, ukucima, ukujonga kwangaphambili, ukudibanisa, ukuthumela ngaphandle, ukuhambisa i-batch kunye nokwabelana ngewatermark.
OKUBALULEKILEYO: Ungaze ucime iifayile zakho zoqobo. Ukujonga ukubonwa kwekopi kwifayile yakho yoqobo kwaye kongeza kuyo i-watermark kuyo. iWatermark ayitshintshi eyokuqala yenza ikopi. Ke, hlala ugcina iifayile zakho ezingakhutshelwanga ukuze zigcinwe ngokukhuselekileyo. Oku kubonakala ngokucacileyo kuwe kodwa kuya kufuneka kuthiwe ngabaqalayo.
IMac: Khuphela kwindawo yethu kwaye utsalele kwifolda yesicelo. Ukufaka kunye iifonti ezisetyenziselwa ukhuphelo lwe-iOS uze ufake iifonti ofuna ukuzisebenzisa:
Windows: Khuphela kwaye ufake usebenzisa isifaki. Iya kubeka i-alias kwiWatermark Pro kwiDesktop kwaye usetyenziso luhlala apha ngokuzenzekelayo ngaphandle kokuba ukhethe indawo eyahlukileyo:
"C: \_ Iifayile zeNkqubo \_ iPlum emangalisayo \_ iWatermark Pro \_"
Iifonti: Ukufaka iifonti ezisetyenziswa kwi-Android nakwi-iOS Khuphela le fayile kwaye uyivule kwaye ufake ifonti ofuna ukuyisebenzisa.
OKUBALULEKILEYO: Abasebenzisi beWindows abanokuSombulula okuphezulu kwesiSeko. Ngamava omsebenzisi obalaseleyo tshintsha useto lweWindows OS yeWatermark Pro App. Landela le miyalelo mibini ilula.
1. Ekunene, cofa kwi icon yeWatermark Pro kwaye ukhethe ukuhambelana kwaye ukhethe utshintsho kwizicwangciso ze-DPI eziphezulu emva koko ukhethe u- "Override High DPI Scaling" kwaye usete kwiNkqubo (Uphuculo). Kubonwa kwiscreen esingezantsi.
Cofa ekunene kwi-desktop ukuze ubone le dialog. Cofa iisetingi zoBoniso ezibonwe kwisikrini esingezantsi.
Guqula 'iisetingi zokubonisa' (ngokuzithandela) kubonwe kwi i-skrini apha ngezantsi, kukhetho lwakho kunye nokuxhomekeke kwamehlo akho. Ukuba ufumanisa iwindows yeWatermark incinci kakhulu, ukuhlengahlengisa ukusetwa komboniso ukuya kwi-150% okanye i-200% kunye nokuhlengahlengisa useto lweWatermark's's App's 'fit. Emva koko usete. Ezi setingi ze-iWatermark zikhunjulwa kukuhlaziywa konke.
Nokuba iWatermark inokwenza izinto ezininzi (yenza ubungakanani kwakhona, phinda ubize igama, njl njl.) Eyona nto isetyenziswa kakhulu kukujonga imifanekiso. Esi sifundo esisisiseko siya kukukhokela ekubekeni i-watermark kwifoto. Iisikrini zazenziwe kwi-Mac kodwa kufuneka zijongeka ngokufanayo kwi-Windows version.
Khetha okanye uhudule kwi-'In Well Well 'ifoto okanye iifoto kunye / okanye iifolda zeefoto (iifoto) eziza kusetyenzwa.
Khetha / ubalaselise i-watermark okanye ii-watermark (ewe, iWatermark inokubonisa i-watermark ene-watermark engaphezulu kwesinye ngexesha) kwikhabethe le-watermark ngasekunene.
Yenza ifolda kwidesktop yakho kwaye ukhethe okanye uyihudulele 'ekuPhume kakuhle'.
Cofa iqhosha lokuQalisa ukuQalisa.
Igqityiwe! Jonga iphepha lokuphuma kwimifanekiso yakho ebukelwe
OKUBALULEKILEYO: Ungasebenzisa iiwatchark ezininzi ezibonakalayo njengoko ufuna ukuzisebenzisa kwangaxeshanye kwifoto okanye iifoto. Kunokubakho kuphela i-metadata enye okanye i-stegomark kwifoto okanye iifoto ngexesha.
I-watermark nganye ekhethiweyo kuManejala e-Watermark yongezwa kwifoto okanye kwifoto nganye. Unokukhetha ngaphezulu kwe-watermark eyodwa kumanejala we-Watermark ngeendlela eziqhelekileyo zokukhetha. Cofa kube kanye ukhethe i-watermark enye. Cofa u-Shift kwiqela ukuze ukhethe ngokuqhubekayo. Cofa kwi-Mac okanye cofa kwi-Windows ukuze ukhethe ngokungagungqiyo.
Qala ngokwenza i-watermark yokubhaliweyo. Ezinye iintlobo ze-watermark zenziwe ngendlela efanayo. Ukwenza i-watermark yakho yokuqala vula i-Watermark Manager Drawer (jonga ngezantsi ividiyo / oopopayi).
Ezantsi kwesobunxele 'kuMphathi weWatermark' cofa iqhosha eliluhlaza okwesibhakabhaka + (jonga ividiyo ngasentla / an
imation) ezantsi kwikhabhathi.
Enye indlela kukuya kwimenyu yeFayile kwaye ukhethe i-Watermark entsha okanye ukuyalela u-N.
Imenyu eyehlayo ivela, khetha 'Umbhalo ...' ukwenza iicermark ezintsha.
Uya kubona lo mhleli we-watermark (ngezantsi) ovumela ukutshintsha kwesimo sewatchark yokubhaliweyo.
Yongeza isicatshulwa. Guqula ifonti, ubungakanani, umbala, kunye nolungelelwaniso, njl.njengoko unqwenela. Nika i-watermark igama elaziwayo elichongiweyo, hit the 'Kwenziwe' kwaye iya kugcinwa 'kwiWitermark Manager' apho ungayikhetha ngalo naliphi na ixesha ofuna ukuyisebenzisa kwakhona ukubheka umfanekiso.
Okwangoku, kukho iindidi ezili-10 zewatermark. I-watermark ebonakalayo eyi-watermark ebonakalayo kwiifoto. Isicatshulwa, Isicatshulwa kwi-Arc, Isibhengezo sombhalo, umzobo weBitmap, umzobo weVector, iiLayini, QR-Code kunye noBorder. Iindidi ezi-8 ezingabonakaliyo ze-wagtermark, iMetadata kunye neStegomark. Kuninzi okuzayo.
Apha ngezantsi sixoxa ngocwangciso lwanhlobo ngalunye lwe-watermark ngokweenkcukacha.
Iimpawu zamanzi ezibonakalayo
Iitermark zewindows kulula ukuyila. Okubhaliweyo kubukhali nangayiphi na ubungakanani kwaye kuxhomekeke kwifonti ekhoyo. I-iWatermark + inika ukufikelela kwiifonti ezingama-292 ezintle (uninzi lweefonti zikaGoogle) ukongeza kwifonti yenkqubo.
Le skrini ingentla ibonisa zonke izicwangciso ozibonayo xa usenza i-watermark yombhalo.
1) Thayipha-Seta imenyu yokudropha kwenye yeentlobo zewatermark.
2) Igama-Beka igama olifunayo le watermark
3) Umxholo-Setha umxholo we-watermark yesicatshulwa.
4) Faka Faka umxholo oonobumba abakhethekileyo njengophawu lwelungelo lobunikazi okanye uphawu lwentengiso, njl.njl. Unako ukufaka ii-tag eziguquguqukayo ze-IPTC okanye ulwazi lwe-ExIF kwifoto. Ulwazi ngakumbi kulapha.
I-5) Ifonti-Cwangcisa umgca kwaye ulungile kubungakanani bamagama.
6) Isiphumo- Icwangcisa isiphumo esibonisa umfanekiso okroliweyo, i-emboss, i-inverse, njl, ukuya ngasekunene kweZiphumo, seta umbala wefonti, istopikhi sesicatshulwa, kunye nokuya kwicala lokukhanya kudala isithunzi.
7) Umbala ongemva-Beka umbala ongemva kunye neenkcukacha zoMda
8) Ukulungelelanisa-Beka uhambelwano
9) Ukujikeleza-Utshintsha ukujikeleza kwesicatshulwa.
I-10) I-Opacity-Beka i-Opacity / Transparent.
11) Ukulinganisa-Umisela iWatermark ngokwahlukeneyo kuba inika ukhetho lokosulela kunye nokuphosa ngokupheleleyo.
Isalamane (%) -eseti emiselweyo, kulula ukuyiqonda nokuyisebenzisa. Ngaba kanye le nto ifunwa ngabantu abaninzi. Kwimo yemeko yokuhlangana isetwa% ukusuka kwimiphetho. Nokuba ungakanani ubukhulu befoto, uya kufumana iziphumo ezifanayo. Ubungakanani beWetsermark / isikhundla ziyachaphazeleka kubungakanani bemifanekiso. Kwiphepha lefoto le sethingi ikuvumela ukuba usete imeko ye-watermark (ngo%) ngokungakhathaleli ubungakanani kunye nokuqhelaniswa nefoto nganye kwibatch. Umzekelo: kwiqela leefoto ezi-2, enye isezantsi kunye nesinye esona sigqibo siphakamileyo, umda watermark usekwe ube ziipesenti ezili-10 ububanzi kwifoto enye yesisombululo esisezantsi xa ulinganiselwa kwiipikseli ezingama-20 ububanzi kwifoto yesisombululo esiphezulu. Kwixa elidlulileyo besinemodi "yesihlobo", kodwa abanye abasebenzisi baye bacela i "Absolute" enye.
Ngokubanzi (iiphikseli) - setha yonke into, isikhundla, iifonti, imida, iigrafikhi kunye nayo yonke into iyitshintshiwe ukuze isebenze ngeephikseli. Imo yemetric "engenanto" yenza ubungakanani / isikhundla sayo yonke into ezimeleyo kubungakanani beefoto. Ubungakanani bamanzi kunye nendawo abaza kuhlala kuyo iyafana (kwiiphikseli) yazo zonke iifoto. Umzekelo: kwiqela leefoto ezi-2, enye isezantsi kunye nesinye esona sigqibo siphezulu, i-watermark esekwe kumda weephikseli ezili-10 ububanzi kuzo zombini iifoto ziya kuba ziipesika ezili-10 ububanzi.
Isalamane kukuseta indawo ye-watermark ngeepesenti. Oku kuba yimfuneko xa ufuna i-watermark ibonakale ngokufanayo kwaye kwindawo enye kwibhendi yeefoto ezinokuthi zonke zibe zizisombululo ezahlukeneyo, ubungakanani kunye nokuqhelaniswa.
Kwi-skrini ungabona imenyu yokuhla kwe-scaling isethwe ukuba 'Akukho kuHlela' ngokuzenzekelayo. Oko kuthetha ukuba awusebenzi kwi% kodwa kwiiphikseli.
Zonke iinketho zoBungakanani ziyabonakala kwimenyu eyehlayo ngaphezulu 'Akukho mlinganiso', 'umGangatho oLingeneyo ku:' kunye 'nomlinganiso obanzi ku:'
Akukho Scaling-kuseta ukukhutshwa ukuze kusetyenzwe kwiiphikseli.
Umda othe nkqo ukuya: - kuseta isikali sokusebenza ngokutyibilikileyo kwi%.
Isikali esimeyile ukuya: - sibeka isikali ukuba sisebenze ngokuthe nkqo kwi%.
12) Iphepha lokugquma umfanekiso - iphinda-phinde itekisi ixesha elininzi kwifoto. Oku kubalulekile kwabo bantu bafuna ukuqinisekisa ukuba akukho nxalenye yeefoto ithathiweyo.
13) Iphini Ikuvumela ukuba usete indawo yewatchark ngendlela yokuba ifane kuzo zonke iifoto, ingasonjululwa isisombululo sayo (imbonakalo okanye imbonakalo yomhlaba). I-Pin ivumela ukubeka indawo ngendlela eqhelekileyo ukuya phezulu, ekhohlo okanye ezantsi, ekunene, njl.
14) IndawoNje ukuba usete indawo ngokubanzi kunye nePine ungayicacisa kakuhle le ndlela. Apha ngezantsi ubona i 'Offset X' kunye ne 'Offset Y'. Kuxhomekeka ekubeni yeyiphi iPine oyikhethileyo ungatshintsha u-X kunye no-Y, u-X okanye uY. X yindlela ethe tye kwaye indlela enguY yindlela ethe tye.
Ukuba uyayibona ifoto enye kukho iindlela ezilula zokuseta indawo kodwa isizathu sinje ikukuvumela ukuba iiwermark zibonakale kwindawo enye nokuba ubheka ifoto enye okanye iwaka lamawaka obukhulu obahlukeneyo.
I-Watermark yokubhaliweyo inezona zisetingi kakhulu saye saqala ngayo. Ngehlobo ngalunye lwe-watermark olulandelayo songeza kuphela inkcazo yesimo esingafakwanga kwi-Watermark yokubhaliweyo.
Iimpawu kwiitermark Watermark
Iimpawu ziluncedo kakhulu. Sebenzisa 'Fakela i-Tag (s)' kuzo zonke iisetingi zelitermark yombhalo (obonwe apha ngasentla) ukubeka iMetadata (njengemodeli yekhamera, umhla wokudalwa, amanani alandelelanayo, igama lefayile, indawo, njl.njl) ukusuka kuloo foto okanye ividiyo kwiwermark ebonakalayo kuloo nto. ifoto okanye ividiyo. Sebenzisa ezi ukwenza i-watermark yakho ehlengahlengisiweyo ukubonisa ulwazi olwahlukeneyo kwiifoto zakho eziya kwahluka ngokuxhomekeka kwimethadatha ekweso sithombe.
Oku kunokusetyenziswa ngeendlela ezahlukeneyo. Nanku umzekelo.
Abaseli abadala kunye abancinci. Kauai. 2007 © julian miller
Umzekelo 1: Masithi ufuna ukubeka inani elahlukileyo, njengenani elifakelweyo kwifoto nganye kwi-batch ye-119. Apha ngasentla i-skrini ungayibona indlela iithegi kunye neekegi zongezwa kuyo i-watermark yokubhaliweyo kwaye ibekwe kwifoto. Ngoku ifoto nganye ebhafini iya kuba neNgxelo eyahlukileyo kunye neTotali eyahlukileyo. Inokubonwa inesenzo ngezantsi ezantsi kwesithombe esingezantsi kwesondeza kwisithombe esingezantsi. Oku kubonisa ukuba iifoto nganye zibhalwe ngokuchanekileyo kule meko, inombolo 021 ye-119.
Lo mfanekiso ususiziweyo kwinxalenye yomfanekiso ongasentla obonisa uphawu lokulinganisa olusetyenzisiweyo.
Umzekelo 2: Yongeza i-Latitude kunye ne-Longitude kwiifoto ezi-1 okanye ezili-10,000 XNUMX usebenzisa iithegi. Kubonwa ngasekunene ngelixa usenza i-watermark ngomboniso wangaphambili.
Umzekelo 3: Masithi uphinda ubuyekeze iikhamera ngephephabhuku okanye ngewebhusayithi kwaye ufuna ukuvavanya iifoto ukusuka kwikhamera ethile. Ukwenza oku kufuneka ubonise iifani ezahlukeneyo kumakhulu iifoto ezithathwe ngeendlela ezahlukeneyo. Umsebenzi owoyikekayo wombutho. Iimpawu zeWatermark zenza lula lo msebenzi kuba ngoku unokubeka ii-specs zekhamera, nangaliphi na ixesha ifoto ithathwa, kwifoto nganye.
Lo mfanekiso ubonisa iileyibhile ezinee tags ezibonisa igama lethegi kunye neGPS (ubude nobude) befoto ethile.
Isicatshulwa kwiArc Watermark
Umbhalo we-Arc Watermark uvelisa i-watermark yesicatshulwa kwindlela egobile.
Ngasekunene zizo zonke iisetingi zeArc yokubhaliweyo. Inezicwangciso ezibonwe kwi-watermark yokubhaliweyo kunye nokunye. Ezo zicwangciso zongezwa zichazwe ngezantsi.
Yenza iRadius ngokwayo-iseti ngokuzenzekelayo iradiyo efunekayo ukuze isicatshulwa sihlangane. Oku kugubungela iRadius ngezantsi.
Irediyadi - isicatshulwa ngaphandle kwe-arc
Isicatshulwa A okanye ∀ -nikezela isicatshulwa kwicala lasekunene phezulu okanye ezantsi.
I-angle - ijikeleza isicatshulwa ngeenxa zonke kwi-arc.
I-angle - tshintsha i-angle yombhalo kwi-arc. Okanye ujikeleze i-engile kunye nesangqa kunye ne icon yedash.
Olunye useto olungakhankanywanga apha luya kufumaneka kwi-Umbhalo weWisermark yoThintelo apha ngasentla.
Isicatshulwa kwi-Banner Watermark
Isibhengezo sisicatshulwa esinemvelaphi ehlengahlengiswayo.
Ngaphezulu yincoko yababini yeseto seBanner watermark. Njengoko ubona kubeka isibhengezo esinokutshintshwa kulo naliphi na icala lefoto. Izicwangciso ziqhelekile, uninzi lwazo luyafana ne-watermark yokubhaliweyo. Umahluko kuphela iqhosha lerediyo elivumela ukuba ukhethe ngokuthe nkqo okanye othe tye.
I-Bitmap / i-logo / iMifanekiso yeWatermark
Iigraphic Watermark zilungile iilogo, ubugcisa kunye nesiginitsha. Sebenzisa uphawu lwakho okanye nayiphi na imizobo kodwa kufuneka babe yifomati ekhethekileyo ebizwa ngokuba yi-.png inemvelaphi ebonakalayo. Utyikityo lwesampulu, iisimboli kunye neminye imizobo esiyifakayo inemvelaphi ebonakalayo kwaye yeefayile ze-.png. Oko kuthetha ukuba nangona igraffiti isikwere kuphela utyikityo ngokwalo libonisa kwaye ingelilo utyikityo luyacaca ukuvumela umfanekiso ongemva ukuba ubonakalise. Ifomathi yefayile yokwenza oku ibizwa ngokuba yi .png ngokubonakala ngokucacileyo kwaye ivumela imvelaphi ye-watermark ukuba ibonakale (a .jpg ayikuvumeli oku kusekuhleni, .png kufuneka isetyenziswe).
Ingxoxo yeBitmap Graphic watermark.
Oku kwenzelwa iilogo kunye nobunye ubugcisa bemifanekiso.
1. Kumhleli wesitermark nqakraza 'Yongeza iGrafiki eNtsha'. Unokukhetha nayiphi na ifayile yomzobo efana nelogo yakho ukuba isebenze njenge watermark. Imizobo ibhetele xa zikho .png iifayile ezibonakalayo ekucaceni ukuba imvelaphi ayibonisi. Bona i FAQ Ezinye iinkcukacha.
2. Cofa nakweliphi na isiXhobo ukutshintsha i ukujikeleza, Kuhleni, njl. Nika igama kwaye ugcine ugcine.
3. Iwashi yakho entsha yongezwa kwimenyu eyehlayo (ebonwe apha ngasentla). Khetha kuyo okanye nayiphi na enye into ukubonakalisa iifoto. Sebenzisa iqhosha ukucima i-watermark ebonisiweyo
Ukutyikitya-ukongeza utyikityo lwakho njengewatchark usebenzisa iBitmap Watermark.
Udinga ifayile ye-.png yesitywina sakho. Oku kunokwenziwa ngeendlela ezahlukeneyo.
Eyona ndlela ilula kukuyicela kumyili oyila umfanekiso.
Yenze ngokwakho. Okokuqala, sayina igama lakho ngepensile emnyama okanye umakishi kwiphepha elimhlophe.
Okulandelayo, sebenzisa ifowuni yakho ukuthatha isifinyezo sesiginitsha sakho ephepheni okanye usebenzise iskena sedeskithophu.
Sebenzisa i-photoshop okanye usebenzise i-Preview app eza kuzo zonke iiMacs.
Iilawermark zemithi zihlala zibonwa ngokusetyenziswa ziinkampani zemifanekiso yesitokhwe. I-watermark yeLines iveza ukuba ibonakale ngaphandle embindini weefoto. Olona luvo luphambili kukuba le yindlela enamandla yokuthintela abantu ekukhupheleni iifoto njengoko oko kuya kudala umsebenzi omninzi ukwenza loo migca inyamalale njengoko begubungela uninzi lweefoto.
Useto lweWatch watermark lubonisiwe kumfanekiso-skrini. Izicwangciso zicacile. Kufanelekile ukubavavanya bonke ngaphandle ukuze babone ngqo abakwenzayo. Isicwangciso esingacacanga siyimpawu ezifunyenwe emva kokuba ucofe umbala welayini. Incoko yababini ibonwa ngezantsi ngasekunene kwesikrini. Ezantsi kwincoko yababini yibar yebar yokutsala opacity.
Ikhowudi ye-QR (imele "Impendulo ekhawulezileyo") yikhowudi efundwayo yefowuni enokugcina i-URL yewebhusayithi, isicatshulwa esicacileyo, iinombolo zefowuni, iidilesi ze-imeyile kunye nokunye okuhle nenye idatha ye-alphanumeric ukuya kuthi ga kuma-4296. I-QR inokwenza i-watermark enhle.
Umzekelo we-QR ongezantsi ubambe iwebhusayithi yethu ye-URL, https://plumamazing.com. Zombini izixhobo zekhamera kwi-iOS (kwi-iOS 11) kunye ne-Khamera ye-App engacocekanga ekwaziyo ukuskena nokwenza isenzo kulwazi kwikhowudi ye-QR. I-Chrome ikwanokufunda iikhowudi zeQR kuzo zombini i-Android kunye ne-iOS. Kukho nezinye izinto ezininzi zesikena se-QR ezifumanekayo kwiivenkile zeapp. Skena ikhowudi ye-QR engezantsi kwaye ufumana ukhetho lokuya kwindawo yethu ngokuzenzekelayo. Unokwenza indawo yakho enye okanye nayiphi na iphepha elinalo naluphi na ulwazi olufuna ukubonisa.
Imizekelo yokusebenzisa. I-QR's inokulunga njenge-watermark kwiifoto kunye neminye imizobo enokubamba igama, i-imeyile, i-URL yokuthatha abantu baye kwindawo yakho okanye kolunye ulwazi kuxhomekeke kubuchule bakho.
1. Umntu unokuba ne-watermark ye-QR yeqela leefoto kwaye i-QR nganye ingakhokelela kwiphepha lewebhu yayo ngolwazi malunga nendawo, iimeko, amaxabiso, njl.
2. Jonga imifanekiso yakho ngeQR equlathe i-URL, i-imeyile, ilungelo lokushicilela kunye nolunye ulwazi. Ilungile ekugcineni unxibelelwano lwakho kunye nefoto ye-Facebook, Twitter, kunye nezinye iidiya zentlalo. Xa ulayisha ifoto kwiisayithi zosasazo loluntu zihlala zisusa imethadatha. Iisayithi zentlalo azisusi ii-watermark ezibonakalayo ezinje ngesicatshulwa, utyikityo, imizobo okanye ii-QR.
3. Yenza ividiyo yokufundisa kwiVimeo, YouTube, njl.nendawo yakho. Beka ikhonkco ngqo kwividiyo yakho kwiQR. Fumana iphepha lokuprinta iiprinta uze uprinte iqela lezi khowudi zeQR. Ngoku juba le khowudi ye-QR kwisikhokelo. Xa umsebenzisi efuna uncedo olubonakalayo bangakwazi ukuskena i-QR ukuya ngqo kwividiyo.
Olunye uhlobo oluluncedo yiBorder Watermark. Isebenzisa i-SVG (inguqulelo egqibeleleyo kuwo onke ubungakanani) ubugcisa bokuzoba imida kujikeleze ifoto yonke kunye nokuprintwa ezimbombeni.
Iimpawu zamanzi ezingabonakaliyo
IMetadata liqela leentlobo ezahlukeneyo zolwazi malunga nefoto. Iitermark watermark zilula kakhulu ukuyila.
I-StegoMark yiWatermark steganographic watermark. Le yi-watermark efihla ulwazi kulwazi lwefoto ngokwayo. Ifoto enemibala eneneni ngamanani amaninzi. Amanani achaza umbala kunye nendawo. Kweli nani likhulu lamanani, kukho indawo yokufihla amanani ambalwa. Yiloo nto uStegoMark ayenzayo evimba ulwazi olufunayo kwidatha yemifanekiso kwaye angakhupheli idatha efanayo. I-StegoMark yenziwa kwaye yahlukile kwi-iWatermark.
Omnye umntu unokuvelisa iitermark zakho ezibonakalayo kwifoto yakho kodwa iStegoMark isemngciphekweni wokuhlala ugcitywe kwifoto kuba ayibonakali kwaye iyabomelela ngakumbi kuxinzelelo lwe-jpg, ukutyala kunye nolunye utshintsho kune-watermark ebonakalayo.
OKUBALULEKILEYOI-1 StegoMark eyi-XNUMX inokusetyenziswa ngexesha. Ngelixa ukhetha ezininzi ezibonakalayo (isicatshulwa, imizobo, qr, njl. Njl. Akukho mda kwinani leefoto ezenziwa ngeStegoMark kwakanye.
OKUBALULEKILEYOIimpawu ezingama-25 okanye ngaphantsi (kunconyiwe) kwiStegoMark ziyivumela ukuba inyame ngakumbi xa iphinda iphinda iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde ihlaziye isohlo elibonwe. Ukuya kuthi ga kwi-80 kunokusetyenziswa kodwa kuya kuchaphazela ukuqina komyalezo. Khumbula ukuba ungasebenzisa isifinyezo se-URL ukwenza i-URL ibe yincinci yokungenisa.
OKUBALULEKILEYOI-StegoMark isebenza kuphela kwiifayile ze-.jpg. Isetyenziswe ngokufanelekileyo kwiifoto ezinemifanekiso ephezulu yesisombululo. Iifoto ezineepateni ezahlukileyo, imibala, ukwenziwa kungabamba ulwazi olungaphezulu kwi-Stegomark.
Umzekelo 1: Umfanekiso ophantsi osisibhakabhaka kunye nesibhakabhaka esikhulu esibhakabhaka esicacileyo esibhakabhaka sinokubonisa izixhobo zakudala. Amanani enza lo mfanekiso ziyafana kwaye zilungelelene. Kukho okumbalwa okuncinci kwaye ngenxa yoko akukho gumbi elincinci elikhoyo lolwazi lweStegoMark.
Umzekelo 2: Imifanekiso ephezulu yehlathi, imithi, ingca, okanye isibhakabhaka inokungena okungakumbi (ngokwawo onke amanani ayenzayo) kwaye ngenxa yoko igumbi elininzi lolwazi lukaStegoMark.
I-StegoMark kukuqala kokuphunyezwa kwewatch ye-steganographic yokufota kwaye ifumaneka kwi-iWatermark kuphela. I-Steganography ibhekisa kuyo nayiphi na inkqubo yokungenisa idatha ethile ngokungabonakali kwidatha yomfanekiso wesithombe.
I-StegoMark kuba idibanisa iSteganogra, edla ngokubizwa ngokuba nguStego ngokufutshane kunye noMark ukusuka kwigama elithi Watermark. I-StegoMark isebenzisa i-algorithm ekhethekileyo eyilwe kwiPlum emangalisayo. Le encoding ekhethekileyo yenza ukuba idata iphantse ayinakwenzeka ukuba iqonde ngaphandle kwe-iWatermark. Ukuba akukho gama lokugqitha kwaye nayiphi na ikopi ye-iWatermark inokuveza isicatshulwa esifihliweyo kwifoto yi-iWatermark. Ukuba kukho ipasigama, ngumntu kuphela onegama eligqithisiweyo kunye neWatermark enokuveza isicatshulwa esifihliweyo.
Enye indlela yokusebenzisa i-StegoMark kukushumeka i-imeyile okanye i-URL yeshishini kwifoto. Oku kunye neMetadata kunye nekhabhathi ebonakalayo inika uluhlu olwahlukileyo lokhuselo lweziqinisekiso zakho ngaphakathi kwaye ziqhotyoshelwe kwifoto. Umaleko ngamnye we-watermark uya kumelana ngeendlela ezahlukeneyo ezinokuthi zenziwe kwifoto njengokutsala, ukuphinda uphinde, unike igama ngokutsha, njl njl ukugcina ulwazi lobunini bakho.
Ukuqala ukuvula iphepha le 'Watermark Manager' kwaye ukhethe uphawu oluhlaza okwesibhakabhaka '+' kwaye uya kubona le menyu yokwehla:
Khetha into yokugqibela yeStegoMark…
Kwigama elithi 'Gama' faka igama elichazayo kule StegoMar.
Xa uphosa kwigalelo leqela leefoto kwaye une-stegomark ekhethiweyo, inkqubo yokubetha kunye nencoko yababini iphakama ifuna iphasiwedi okanye iphasiwedi.
'Kwibhokisi' faka isicatshulwa ofuna ukusingenisa kwidatha yomfanekiso.
Usebenzisa igama eligqithisiweyo akukho mntu une-iWatermark Pro unokufunda umyalezo kodwa akukho wumbi. Kwimfihlo enkulu ngakumbi, faka ipasigama, emva koko umntu onephasiwedi kunye neWatermark Pro kuphela onokufunda lo myalezo ubhaliweyo ungcwatyelwe kwifoto yomfanekiso.
Nje ukuba yenziwe, thumela umfanekiso weStegoMark'ed. Jonga icandelo elilandelayo 'Ukufundwa kweStegoMark' ukubona indlela yokufumana ulwazi olufihliweyo.
Iindlela ezi-2 zokutyhila i-StegoMark
Indlela yokuqala kunye elula yokufunda iStegoMark kukuya kwimenyu yeefayile, ukhethe into ebizwa ngokuba yi 'StegoMark Viewer'. Tsala ifoto yakho kuyo, okanye usebenzise iqhosha lokukhetha. Ukuba akukho phasiwedi iya kuwutyhila ngokukhawuleza umxholo. Ukuba kukho ipassword thayipha igama eligqithisiweyo uze ubethe 'Faka isicelo'. Apha isicatshulwa esivelweyo sithi 'Ifoto nguMark Fleming'.
Indlela yesi-2 yokufunda iStegoMark, vula ifoto ethengisiweyo yeStegoMark ngokuyilahla kwitreyi yokufaka yeWatermark Pro okanye usebenzisa evulekileyo kwimenyu yefayile.
Emva koko kumda osekhohlo wetray yokufakelwa uthepha i-i kunye nesangqa esijikeleze i icon. Oko kuya kuvula iwindows yolwazi. Cofa kwi icon ye-StegoMark kule festile yolwazi njengoko ibonwe kumfanekiso ongezantsi. Ngenisa igama eligqithisiweyo ukuba unayo.
eyona Iphaneli yezicwangciso
Kweli candelo siza kuhamba ngethebhu nganye ephezulu kwefestile kwaye sinikeze iinkcukacha ezithe kratya.
Ithebhu nganye kwibar yesixhobo engaphezulu ihambelana nendawo ejongene neentlobo ezithile zezenzo.
I-ExIF / IPTC / XMP
Eyona festile iphambili kwiWatermark Pro. Indawo oya kuyenza kuyo i-watermarking yakho.
Igalelo - apho ukhetha khona imifanekiso yokufaka. Cofa kule ndawo ukukhetha ifayile okanye ifolda okanye tsala nje kwifayile okanye iifayile ofuna ukuzicwangcisa. Indawo yegalelo ibonisa ii-icon zeziphi iintlobo zeefayile ekutsalwa kuzo (i-JPEG, i-PNG, i-RAW, njl.njl) kunye nokubonisa xa inowulawulo (s).
Cofa i-X ukuze ususe iifayile / iifolda ezikhethiweyo.
Cofa kwiglasi yokwenza ubungakanani ukubona indawo yeefayile.
Cofa u 'i' ukufumana ulwazi / umbono wangaphambili. Ukucofa umboniso wangaphambili kwenza okufanayo.
processing-Le ndawo inokujongwa kwakhona kweseto yokujonga amanzi, ukumisela ubungakanani kwakhona, ukuphinda ubize igama elitsha, apha. Ungabeka ngokukhawuleza ukuba yeyiphi i-watermark eza kusetyenziswa kwimenyu eyehlayo. Kananjalo ungakhanyisa / ukucima ubungakanani kwakhona, izithombisi, i-ExIF / IPTC / XMP, kwaye unokuseta ifomathi yokukhupha kunye nomgangatho (ukuba jpeg).
Iziphumo - cofa kwaye ukhethe okanye uhudule kwifolda apho iifayile zakho ezisandula ukwenziwa ziya kuhamba khona.
Umphathi weWatermark- iwindow esekunene. Kulapho ukhetha i-watermark enye okanye ezingaphezulu eziza kusetyenziswa ukubheka iifoto okanye iifoto.
Unokuseta ubume bezinto ezikhutshwayo. Ukutshintsha ubume beefowulda kwiPortrait / kwiifolda zeMihlaba kuyakuhlukanisa zonke iifayile zakho zokungenela kwiifolda ezimbini enye equlathe umzobo kunye nezinye iifoto zoLwaziso loMhlaba.
Ngasekhohlo kweqhosha 'lenkqubo' iqhosha lokujonga ngaphambili elijongeka njengoku.
Le festile yokujonga kwangaphambili inika umbono wendlela i-watermark eya kujonga kwifoto ekhethiweyo. Kuyakwazi ukwaba ngokuthe ngqo ukusuka apha ukuya kwimidiya yoluntu. Cofa kwiqhosha lasekunene ukuze wabelane ngomfanekiso omnye oboniswe kuFacebook, kwi-imeyile, kwi-imeyile, nakweminye imithombo yeendaba kwezentlalo ekufuneka uyikhethile kwiNkqubo yeNkqubo ye-Mac OS. Cofa kuKhulu… ukuvula imithombo yeendaba yoluntu.
a. Umphathi weWatermark
Umphathi weWatermark wahlukile kwiWatermark. Apha kulapho i-watermark inokuba khona:
igcinwe kwaye ihlolwe kwangaphambili.
ikhethwe ukuba ibheke umfanekiso.
ucofe kabini ukuhlela.
igama elitsha lisebenzisa intsimi ezantsi ngasekunene.
kukhangelwa ukusebenzisa intsimi yokukhangela ephezulu ngasekunene.
itshixiwe / vulelwa abakhuselweyo xa ukhiyiwe awukwazi ukuyihlela okanye ukuyicima.
embed IPTC / XMP
Kuthunyelwa kwelinye ilizwe kwaye kwabelwane ngalo nge-imeyile okanye kwimidiya yoluntu
IWindermark Manager Window (ngasekunene ngezantsi)
dala-Enza i-watermark entsha. Cofa kwi + kwaye ubone ezi ntlobo ezininzi zamathumbu ungazenza (umfanekiso ongezantsi).
Susa-Khetha iitermark enye okanye ezingaphezulu ukuzicima.
Hlela -Khetha i-watermark kwaye ucofe eli qhosha okanye ucofe kabini ukuhlela kumhleli we-watermark.
Nqakraza kwi Iinketho zemenyu Ngaphantsi kwale icon yegiya
kwaye ubone le menyu:
Imbonakalo yangaphambili unika imbonakalo usebenzisa ifoto kunye ne-watermark ekhethiweyo.
Hlela - Khetha i-watermark kwaye ucofe uhlele okanye ucofe i-watermark ukuze uyihlele.
Yenza impinda kunye noHlelo Yenza i-watermark entsha enegama elitsha ngokusekelwe kumsebenzi wangaphambili.
Hlanganisa-Dibanisa ii-watermark ezi-2 okanye ezingaphezulu kwesinye.
Yabelana -iiwatchark ngeW * Cloud, i-airdrop, i-imeyile, imiyalezo kunye / okanye ibhokisi eyehlayo.
Ukuthumela ngaphandle-Sebenzisa oku okanye okanye ngokulula nje utsale ikhabe kwiwindows ukuze wabelane okanye ugcobe. Iitermark ezithumele kwelinye ilizwe zinolu phawu:
Ngenisa-Sebenzisa lo myalelo okanye utsalole ii-watermark ezithunyelwa kwelinye ilizwe, kunye ne icon elapha ngasentla, ukuba ube nazo kuMphathi weWatermark.
tshixa -Cofa kwisitshixo esincinci ukutshixa / ukuvula i-watermark. Ukutshixa kuyenza ifundeke-kuphela kwaye ayikwazi ukuhlelwa okanye icinywe.
Vula- Cofa kwisitshixo esincinci ukutshixa / ukuvula i-watermark. Ukutshixa kuyenza ifundwe kuphela kwaye ayihlelwanga okanye icinywe.
Ngenisa okanye Susa i-IPTC / XMP kwi-watermark-Faka okanye ususe ulwazi oluku-IPTC / XMP kwindawo yewermark. Ke xa le watermark isetyenziselwa ukongeza kuyo nayiphi na eminye imisebenzi ibethelela loo metadata.
Umhla / IFomathi yeXesha-Tshintsha umhla / amaxesha efomathi eboniswe kuMphathi weWatermark.
Iimbonakalo zekholamu-Bonisa kwaye afihle izinto ezahlukileyo kwikholamu kuMphathi weWatermark.
b. Isihleli seWitermark
Ukwenza i-watermark entsha cofa i-watermark entsha kwimenyu yeFayile okanye ucofe iqhosha + kwaye uza kuyibona le nto.
Ukuchofoza naziphi na izinto ezingentla kuya kuvula i-Watermark Editor ukwenza olo hlobo lwe-watermark. Kukho umhleli owahlukileyo kudidi ngalunye lwe-watermark. Nantsi imbonakalo yomhleli Wombhalo iWitermark:
Eqhelekileyo - oko kuthetha ukuba akukho mpembelelo.
reverse-Uhambisa ngaphandle komfanekiso wesampula womfanekiso ukusuka kumfanekiso wesampula yemibala, okanye umva, kuxhomekeke ekubeni yeyiphi isampuli enexabiso elikhulu lokuqaqamba. Imvelaphi yeesampulu zemodeli amaxabiso amnyama avelisa akukho tshintsho; I-inverts emhlophe amaxabiso emvelaphi yentsusa.
I-inverse iluncedo olunokusetyenziswa kuba igcina isicatshulwa esicocekileyo sihleleke kwimifanekiso eneemvelaphi ezahlukeneyo zetoni. Okumhlophe ngakumbi okusetyenziselwa okungaphezulu kunokubangcono. Oku kuyinyani kwitekisi kunye nemizobo. Imnyama ayinakwenza nto. Kungcono ukusebenzisa ezimhlophe nakuphi na isicatshulwa okanye imizobo yemo engafaniyo.
Emboss kunye ne-Engrave
Sebenzisa isiphumo esenziwe kwisicatshulwa esivela kwi-Umbhalo weSwermark Useto
Sebenzisa isiphumo esenziwe kunye neMvelaphi kwisicatshulwa esivela kwi-Umbhalo woSetyenziso lweWitermark
Sebenzisa isiphumo esityikitywe kwisicatshulwa esivela kwi-Umbhalo weSwermark Useto
Imvelaphi ye-emboss kunye ne-Engrave Background ziyabonakala-ebonakalayo ukubonisa ifoto engezantsi. Emboss kunye ne-Engrave sebenzisa umbala wombhalo ukugcwalisa u-emboss. Zombini ziluncedo ekubonakaleni okubonakala ngasese.
Okwangoku, unokulawula kuphela izithunzi ezimbini zokulahla kwisiphumo sokukrala.
Ngaphandle kwesithunzi sombala kulawulwa. Ngaphakathi isithunzi simiselwe ubumnyama kwi-Emboss kunye nomhlophe kwi-Engraved.
QAPHELA: Okwangoku isebenza kuphela kwiWindows watermark - hayi kwiSibhengezo okanye iArc isicatshulwa okanye iGrafiki okwangoku.
Isithunzi esimnyama-ngokuchanekileyo obuya kucinga.
Isithunzi esimhlophe - i-ditto
2. U kucoca
Cwangcisa isihluzo sokuvumela iintlobo ezithile zeefayile ukuba ziqhubekiswe.
Ukucoca kungavulwa apha okanye kwiphepha eliphambili. Ukuba ulahla ifolda kwigalelo eligcwaliswe lizo zonke iintlobo zeefomathi ezahlukeneyo kodwa ufuna kuphela ukubonakalisa iifayile ze-.jpg emva koko ukufota kunokukunceda. Hluza iifayile zokufaka kwiimfanelo, amagama aphambili kunye / okanye imethadatha.
Guqula ubungakanani kunye nesampulu yeefoto ezigqityiweyo.
Vula ukwenza ubungakanani kwakhona kule okanye kwiphepha eliphambili ukukhulisa ubungakanani okanye i-watermark kunye nosayizi. Ukwenza ubungakanani kwakhona kuthatha eyentsusa kwaye kuvelise ikopi ebungakanani obuthile. Ifunda ukukhuhla ngaphakathi kububanzi nangaphakathi kobude kwaye oko kuthetha ukuba iya kukwenza ubungakanani kwakhona befoto ngaphakathi kwezo zinto zobukhulu. Unokusebenzisa iseti esebenzayo esetyenziselwa ubungakanani obuqhelekileyo bokukhulisa ubungakanani kwakhona.
Isetyenziselwa ukutshintsha isampulu yesisombululo. Ithetha ntoni le nto? Nantsi into elungileyo ngcaciso.
4. Ukuqamba kwakhona
Qamba igama zonke iifom ezigqityiweyo ngokuzenzekelayo.
Vula ukuqamba kwakhona apha okanye kwiphepha eliphambili. Ukuthiya kwakhona kwenza iikopi zeefayile zokufaka kwaye uziqambe ngokutsha nayiphi na into oyithathileyo ngokusekwe kukhetho lwakho olungentla. Khetha i-tag ofuna ukuyongeza kwigama lefayile (okanye iifayile) okanye uchwetheze isimaphambili sakho okanye isimamva sakho. Iimpawu ziimpawu eziguqukayo ezimela loo lwazi kwifoto. Imodeli iya kubeka imodeli yekhamera egameni lefayile entsha. Ukubala kuya kukhula nge-1 kwifoto nganye eyenziweyo.
ICEBISO: Beka ixesha kunye nomhla woFomati kulo IMacyiya kulwimi kunye neMimandla kwiiNkqubo ezikhethiweyo emva koko hit the Advanced inkinobho. KwiWindows nqakraza kwimenyu yokuQalisa, kwaye emva koko ucofe iPaneli yokulawula emva koko ucofe uMhla okanye Ixesha.
ICEBISO: Tsala ungene ngaphakathi / ngaphandle kweethegi ezahlukeneyo (umhla, ixesha, ikhamera, imodeli, njl.njl.) Kwaye ujonge ukujonga kwangaphambili ukuze ufumane incasa yendlela igama lefayile eliya kujongeka ngayo.
5. Iziphumo zoPhumo
Apha unokutshintsha ifomathi yefayile, umgangatho kunye neJPEG eqhubekayo. Useto oluninzi lokuthumela luyafumaneka apha.
Ifomathi yesithombe: tshintsha ifomathi yemveliso ephuma kwijpeg, TIFF, Photoshop PSD, PNG, BMP kunye neJPEG 2000.
Ulwandiso lwefayile:sukutshintsha oku ngaphandle kokuba uyazi into oyenzayo kwaye unesizathu esithile. Abanye abantu babuze obu buchule kodwa oko kuthetha ukuba ukucofa kabini i icon ngeke kuvule ii-software ezixhomekeke kulwandiso.
umgangatho: Ukutshintsha isilayidi esemgangathweni kuthetha ukuba utshintsha uxinzelelo lweJPEG. Ingahamba ukusuka kwi-100 Oko kuthetha ukuba umgangatho ngokuchanekileyo uyafana okanye ungalahleki. Ngelishwa, ukubeka ukuya kwi-100 kukhulisa ubungakanani befayile, kuyinyani kuzo zonke iinkqubo. Sicebisa ukuba kusekwe i-85 engagqibekanga. 85 inika umgangatho omkhulu kunye nobukhulu obuncinci elincinci kunefayile yasekuqaleni. Iinkcukacha ezithe kratya malunga nomgangatho zichazwe kwinqaku le-Intanethi:
Elinye inqaku elihle malunga noku:
Zombini kufuneka zikuncede uqonde ukuba kutheni sicebisa ukuba zingama-85 kodwa zikushiyele kuwe ukuba uguquke njengoko unqwenela.
Ulwandiso lweZantsi: yenza ulwandiso lusezantsi. Yicime ukuze ube nokugcina ityala.
Sebenzisa ukuqhubela phambili kweJPEG (kuyacetyiswa): Kucetyiswa oku. Ii-JPEG eziqhubela phambili (p-JPEGs) zincinci kancinane kunee-JPEG ezisisiseko, kodwa inzuzo yabo ephambili kukuba zibonakale ngokwamanqanaba, zinika isiphumo somfanekiso wokuphelelwa, ngokufana nee-GIFs, ngokuchaseneyo nokupeyinta ukusuka phezulu kuye ezantsi.
Yenza imifanekiso encinci yeefoto ezigqityiweyo.
Vula i-thumbnails apha okanye kwiphepha eliphambili ukuze ufumane i-icon yemilinganiselo ethile kwifayile nganye eyongeziweyo. Izithombisi zenziwa ngqo kwifolda yokukhupha kunye nayiphi na imifanekiso kodwa ngesithupha esoluliweyo ukuzehlulahlula kwiifoto eziqhelekileyo.
Khetha u "Sebenzisa ulawulo olwahlukileyo lwezikhombisi" ukuba ufuna ukuba nazo zonke izikhombisi ezitsha kwifolda entsha kwifolda yokukhupha.
8. I-ExIF / IPTC / XMP
Zonke ezi zi-ExIF, i-IPTC, kunye ne-XMP ezilapha ngasentla ziintlobo zeMetadata. iWatermark inokwenza izinto ezi-3 ngemethadatha.
1. Inokongeza kwaye isuse imethadatha kwifoto okanye iifoto.
2. Inokongeza kwaye isuse i-metadata kwi-watermark.
3. Imethadatha inokuboniswa kwi-watermark ebonakalayo.
Okokuqala siza kuthetha ngenqaku loku-1.
1. Yongeza kwaye isusa imethadatha ifoto okanye iifoto.
I-iWatermark Pro inokugcina, isuse kwaye ingene kwimeta ye-tag yemeta. Kananjalo olu lwazi lwe-metatag lungasetyenziselwa ukujonga imifanekiso. Iinkcukacha ezithe kratya kwi-ExIF, i-IPTC, kunye ne-XMP apha.
Gcina i-metadata esele ikhona - Yavulwa ngokungagqibekanga. Oku kuphinda phinda yonke ingcaciso yemeta kwifayile yoqobo kwifayile ekhutshelweyo.
Yongeza iMethadata ye-IPTC / XMP enikwe amandla - Xa oku kukhe kwenziwa zonke iimeta ezijongiweyo (Umsebenzisi okwenziwa ngokwezifiso) kwincoko yababini engezantsi ongezelwe kwikopi yefayile yasekuqaleni.
Imenyu eyehlayo ethi isisiseko, ubuNgcali kunye noShishino ikuvumela ukuba ukhethe inani leemeta ofuna ukuhlela nokusebenzisa. Zonke izinto ozijongayo ziya kubhala ngaphezulu iinkcukacha ezikhoyo kwifayile.
ICEBISO: Ngaphantsi kwe-TIFF 'iWatermark Pro' yongezwa phantsi kwesoftware (jonga ngezantsi).
Ukuba ufuna ukukhangela usebenzisa imethadatha kuyo yonke imifanekiso ebunjiweyo oku kuya kusebenza.
2. Yongeza kwaye isusa i-metadata kwi-watermark.
Uncedo lokudibanisa imethadatha kwi-watermark kukuba ngela xesha ngalinye ujonga umfanekiso wongeza iseti yemethata ngaxeshanye.
iWatermark kuphela kwenkqubo esikwaziyo enokwenza oku. Kutheni le nto iluncedo? Njengomfoti, unokuba ne-watermark ebeka i-watermark ebonakalayo ene-logo yakho ephezulu kwifoto kwaye kwangaxeshanye yongeza imethadatha oyikhethileyo njenge-copyright yakho, igama lakho lenkampani, i-URL, i-imeyile kunye / okanye nayiphi na enye idatha yombhalo oyifunayo.
Ungayifaka njani i-metadata kwi-watermark.
Okokuqala, khetha i-watermark.
Okulandelayo, yiya kwiphaneli ye-ExIF / IPTC / XMP kwaye ufake idatha oyifunayo oza kuyifaka kwi-watermark.
Emva koko kuMphathi weWatermark kwaye ukhethe imenyu eyehlayo yokuseta kwaye ukhethe i-Embed.
Olu lwazi luya kubonakala kwikholamu ye-IPTC / XMP kuMphathi weWatermark kwaye ujongeka unje.
3. Imethadatha inokuboniswa kwi-watermark ebonakalayo. Oku kubizwa ngokuba yiTag.
Ukwenza oku kuyitermark yokubhaliweyo entsha khetha i-ExIF, i-IPTC kunye ne-XMP imethadata eziguquguqukayo njengeModeli yeKhamera njengombhalo we-watermark oya kuthi xa uqhubekeka ubonise loo lwazi njenge-watermark ebonakalayo kwifoto (s). Khetha ulwazi lwethegi kule menyu xa usenza i-watermark:
Ukuseta okungadingeki ukuba kuguqulwe.
Inkqubela yokuvula ngokuzenzekelayo-Emva kokuqalisa kokubetha kube kuvulwa incoko yababini yokuqhubekeka.
Inkqubela phambili yokuvala ngokuzenzekelayo-Ngemva kokuqhubekeka ukuba oku kukhangelwe ukuba incoko yababini yenkqubela phambili ivalela ngokuzenzekelayo
Yandisa i Window eSebenzayo-Xa ukwindawo yokulungisa kwithebhu ephambili ihlala ivulekile.
Iifayile zeThala lencwadi ezivulekileyo kwi-Finder elayibrari apho imizekelo kunye nemizobo yempahla yakho yeWatchermark ingongezwa.
Useto kunye neeMatermark -Cofa eli qhosha ukungenisa ukuthanda ukusuka kuWatermark yakudala (hayi ipro).
Iifayile zeThala lencwadi Le yindawo yeefayile ozenzileyo.
Veza ifayile yokhetho -Vula isifumene kwi indawo Ifayile oyikhethileyo kwaye iyiphakamisa.
Jonga Iifayile eziLugcinayo-Senza iikopi zezintsusa zakho ukuqinisekisa ukuba ikhona ikopi yesibini. Eli qhosha liza kuvula le folda kuMfumani.
Hlela konke ukungasebenzi - reset isicelo sokuseto olungagqibekanga lwendalo. Oku kuluncedo kakhulu ukuyisebenzisa ukuba unengxaki.
Umbala ongemva womhleli-lo ngumbala wombala wokuhlelwa. Inokucwangciswa ukusuka kwindawo eyehlelayo kumhleli kwikona ephezulu ngasekunene.
Yandisa imisebenzi yokuqhubekeka kwiThebhu ephambili -Ukuba nokukhangela oku kuyakwenza ukuba rhoqo uvula iWatermark ivuleke kwiThebhu ephambili kunye necandelo eliphakathi (imisebenzi yokulungisa) yandisiwe.
Sebenzisa inkqubela phambili yeJPEG -Ongafumani kusetyenzwa kwesiseko iJPEG. Sukutshintsha oku ngaphandle kokuba uyazi into oyenzayo.
Kwimifanekiso ngaphandle kokuNgena kwiProfayili -Kuvumela ukuba ukhethe iiprofayili ezahlukeneyo eziza kwi-Mac okanye kwiWindows okanye ezilayishwe ku-Nikon, Canon okanye enye isoftware. Okungakumbi malunga neefayile zemibala ye-ICC Apha.
Yenza iFayile yezeMbali-Iyimfuneko kuphela ukuba sicela ukuba uyivule ukuze ufumane inkxaso yetekhnoloji okanye ufuna ilog yazo zonke izinto ezenziwayo.
Veza iMbali yeFayile Oku kubonisa ukuba ifayile yelog.
Ngenisa iiWatermark ezindala -Izakungenisa ii-watermark ezindala. Qho xa iqhosha libhaqiwe liza kungenisa zonke iiwatchark ezindala ngoko kufanelekile ukuyibetha kube kanye ngaphandle kokuba ufuna ukuphinda zonke iitermark ezindala.
Ukungena-Iyimfuneko kuphela xa iceliwe yinkxaso yetekhnoloji. Olu lwazi lwanceda abaqulunqi beenkqubo zethu.
lwebhokisi isetyenziselwa ukugcina kunye nokwabelana ngewatermark.
I-Dropbox Icon -Cofa apha ukuya kwisiza seDropbox kwaye wenze indawo yokugcina ekhululekileyo ye-2 GB kwi-intanethi.
Ukulayishwa kweDropbox-Uba nje une-akhawunti yeDropbox cofa eli qhosha ukuze ulayishe. Kulungile ukuba ugcine i-watermark zakho kwi-intanethi. Ikwavumela ukuba uvumelanise ii-watermark zakho kunye noseto kunye nezinye iikhompyuter.
Ukhuphelo lweDropbox -Zikhuphele iitermatch zakho kunye noseto ukusuka kwiDropbox ukuya kwikhompyuter yakho.
Cofa ibhokisi yempazamo-Icima iicwatch zakho kunye noseto kwiDropbox.
IfotoNotary-Le ibiyinkonzo esiyenzileyo yokuxhasa ii-watermark. Yayiyinkonzo yelifu. Ayisafumaneki. Ukubuyisela endaweni yoko sivumela abasebenzisi ukuba bathumele ii-watermark kwaye basebenzise iinkonzo zabo zelifu.
Le webhu yindawo yokufaka ulwazi lwakho lokubhalisa ukuba uthenge iWatermark Pro kuthi hayi kwiVenkile yeApple yeApple. Nantsi indawo oyibeka kuyo ulwazi lobhaliso esiluthumele ngokuzenzekelayo xa uthenga i-iWatermark Pro. Nje ukuba ufake ulwazi kwaye ucofe iqhosha lokufaka ufumana incoko ethi ngoku ubhalisile.
Sebenzisa usetyenziso luka-Apple's Photo's kunye neWatermark Pro Mac
Ifoto isebenza kunye neWatermark Pro njengeeapsone zokusebenza. I-iWatermark iza kusebenza ngaphakathi kwiifoto njenge-plugin kungekudala.
Ukufaka isicelo seWatermark kwiWindows Explorer
Ukususela ukukhutshwa kwe-2.0.1 yenguqulo yeewindows, unokufaka i-watermark ngaphakathi kwi-windows ukuhlola. Eli nqaku libizwa ngokuba lolwandiso lweqokobhe. Ekunene nqakraza kwifayile yemifanekiso (i-JPEG, PNG, TIFF, BMP, PSD) emva koko ukhethe 'iWatermark ene-iWatermark Pro' nakwimenyu yendawo ebubanzini, enye yeetermark ezidwelisiweyo.
Lo mfanekiso ubumbelwe ngoku. Ukukhawuleza kwaye kulula.
Qaphela: ifomathi yefayile iya kuhlala injalo kodwa ungalawula ubungakanani bomfanekiso kwiqela lesicelo. Izithintelo kulwandiso lweqokobhe:
1. I-watermark enye ngexesha inokufakwa.
2. I-thumbnail ayiyi kuveliswa.
3. Ukuba ifayile yomfanekiso ikhiyiwe ngesinye isicelo ayiyi kusebenza.
4. Ifayile efundwayo kuphela iya kubhalwa kodwa ke ayiyi kufundwa kuphela kodwa inokubhalwa.
iWatermark Pro Imenyu
Ikuvumela ukuba ukhangele iinguqulelo ezintsha zeWatermark Pro. Sicebisa ukuba uhlale unenguqulelo yamva kuba sixakekile silungisa iibgs kwaye songeza izinto ezintsha.
Sebenzisa umfakeli ukufaka zonke iifonti ezisetyenziswa kwi-iPhone / iPad kunye neinguqulelo ze-Android zeWatermark kunye neefonti ezininzi zikaGoogle. Ukuba neefonti ezifanayo kwiikhompyuter ezahlukeneyo kunye neendlela ezahlukeneyo ze-OS ukuba iiwermark ezikhutshiweyo zingabelwane kwaye zikhangeleke ngokufanayo. La mafonti ongezelelweyo anceda ngokuhambelana kwe-watermark kuba ngoku sinikezela ngokwabelana nge-watermarking phakathi kweMac, Windows kunye kungekudala ne-iOS kunye neinguqulelo ze-Android zeWatermark. Ziyingqokelela efanelekileyo yeefonti oza kuyisebenzisa kwiimpawu zamachiza.
Ifonti kunye nesifaki se-plugin sikuyo Apha. Ii-plugins azisanconyi kodwa zikufakelo kubantu abanqwenela ukuqhubeka nokusebenzisa iAperture kunye ne-iPhoto kwiinguqulelo ezindala zeMac OS.
Ukuba uneefayile ezininzi zamazwe angaphandle ezithengiswayo kwifolda ungacofa kwenye kwaye ucofe kwindawo ekhawulezayo yokujonga indawo eshushu ukuze ubonise incoko engezantsi ngolwazi kwi-watermark.
I-Watermark entsha-Yenza i-watermark entsha kumhleli. Ngaba kuyafana nokubetha iqhosha +.
Hlela i-Watermark-Yenza into enye njengokubetha iqhosha lokuHlela kwiqela eliphambili.
Gcina i-Watermark -Yenza into enye njengokubetha iqhosha lokuLigcina kuMhleli weWitermark.
Bhrawuza Media-Zikhuphela ukhetho kwi-iMedia Browser ekhethiweyo kunye nesimahla (iMac kuphela) ekuvumela ukuba ubambe iifoto ngokulula kwiindawo ezahlukeneyo. Nje ukuba ikhutshelwe emva koko isebenza ngoko nangoko ukuvumela ukhetho lweefoto.
Yongeza incwadi eneenkcukacha -Bonisa indawo ekufunyanwa kuyo ifolda yogcino lweefayile zongeniso zokuqala.
Amanzi athumela ngaphandle kwelinye ilizwe -Ukuthumela ngaphandle ifayile ye-watermark kunye ne icon engezantsi.
I-watermark ethunyelweyo iqulethe isicatshulwa kunye nemizobo kodwa hayi iifonti. Ungangenisa nayo le iWatermark Pro kwenye ikhompyuter. Iluncedo kakhulu ekwabelaneni nabanye ngetermark yakho.
Ukukhuphela i icon
Ngenisa iWatermark -Ungenisa ngaphakathi iifayile zewatchark ezithunyelwa ngaphandle
Seta iifolda-Le nto iyenziwa ngendlela efanayo yokufaka / kunye / kunye nokukhangela izinto onokuthi uzenze kwiqela eliphambili.
izicwangciso-Veza izibambo zeNjongo-
Ifoto elandelayo yokufaka -
Ifoto yangaphambili yokufaka -
Into elandelayo yeWatermark -
Into yangaphambili yeWatermark -
Nciphise-Khangela kwimenyu nakwimithombo ye-Apple. Ayikhangeli ncwadana.
Zoom -Vula incwadana yezikhokelo ekwi-intanethi okwangoku
Veza Inkqubela yeMveliso -Ukuba uneziphakamiso / iibugs ungazixela apha. Sijonge Ulwazi ngeFoto -Vula incoko yolwazi
Zisa konke ngaphambili -Zonke ii-windows zeWatermark Pro ziziswa ngaphambili.
Windows -Ibonisa iifestile ezivulekileyo zeWatermark Pro.
ukufuna-Khangela kwimenyu nakwimithombo ye-Apple. Ayikhangeli ncwadana.
Uncedo lweWatermark Pro -Vula incwadana yezikhokelo ekwi-intanethi okwangoku
Ukuzisa impendulo-Ukuba uneziphakamiso / iibugs ungazixela apha. Sijonga ezi kodwa zisenokungaphenduli.
ANokuba ungayintoni na ingxaki, nceda ulandele la manyathelo:
Okokuqala: Qiniseka ukuba uxhaswa. Thumela iiwatchark zakho kwindawo ekhuselekileyo. Yiya isithuba sethebhu kwaye ubethe 'Cwangcisa konke okungagqibekanga'. Oku kuhlala kuthathela ingqalelo ingxaki ethi abantu bayalibala ukuba benze iinguqu kwisethingi ezahlukeneyo. Emva koko zama kwakhona.
LESIBINI: Vula inkqubo kwaye phantsi kwemenyu yeWatermark Pro kwimenyu ethi Malunga nemenyu khetha ukuba ubone ukuba yeyiphi na uhlobo olusebenzayo kwaye lolona lutshanje. Qiniseka ukuba une-iWatermark Pro kwifolda yakho yeSicelo hayi i-iWatermark yakudala. Cima zonke iinguqulelo ezindala. Ukuba kuya kufuneka ukhuphele inguqulelo yokugqibela yeWatermark Pro kule ndawo yethu.
ISITHILI: Qinisekisa ukuba ubhalisile. Bona ngentla.
LESINE: Qalisa ngokulula. Zama i-watermark elula. Tsala ifoto enye kwitreyi yokufaka kunye nefolda engenanto kwitreyi yokukhupha. Khetha enye yeempawu zethu zedemo kwimenyu eyehlayo. Inkqubo yokujonga emva koko itshekishe ikhowudi yokuphuma ukujonga ukuba ifihliweyo iyabukeka.
Ukuba unengxaki usithumelele i-imeyile kwaye usithumelele olu lwazi:
1. Sazise ukuba ulandele le nkqubo ingentla.
2. Sithumele umfanekiso owusebenzisayo. Kwakhona, thumela ngaphandle kwaye uthumele i-watermark oyisebenzisayo.
3. Sithumele ilog ye-console emva kokubangela ingxaki kwiWatermark. Ukwenza oku kuvula ilog ye-console hit iqhosha kwi-tab yangaphambili ethi 'vula iconsole log'. Sula ilog ye-console emva koko usebenzise iWatermark kwakhona ukuze ubangele ingxaki emva koko ukhuphele ulwazi olusiphumo kwilog ye-console kwaye usithumelele i-imeyile.
Q: Ndizingenisa njani iiwatchark zam ezindala zeWatermark?
AYiya kwithebhu ephambili kwaye ubethe iqhosha lokungenisa. Yibetha kube kanye okanye uya kufumana amanqaku aphindwe kabini.
Q: Ndiyibiza njani i-Watermark?
A: Kwiphathi ye-watermark, cofa kwigama le-watermark ukulitshintsha. Unokukhetha kwakhona i-watermark kwaye uyivule kumhleli. Ezantsi ngasekunene tshintsha igama uze ubambe ugcine.
Q: Iimpawu zakho zamachiza zilungile kakhulu ukuba ndingazihlela njani?
A: Khetha nje kwaye ucofe iqhosha lokuhlela. Iya kudala entsha kunye nesihloko esifanayo ngokudibanisa ikopi yamagama ekugqibeleni. Qaphela into yokuba abanye banokuba nesicatshulwa esimhlophe esinokuthi kwimvelaphi emhlophe singangabonakali. Tsala nje kuphela isicatshulwa ukuze ukhethe kwaye usitshintshe kuyo nayiphi na into oyifunayo. Rhoqo kwiidermark zethu zedemo, sisebenzisa i-tag esitsala umnxibelelanisi ophambili (ngesiqhelo wena) kwincwadi yedilesi.
QNgaba ndingongeza ngaphezu kweelitha enye ngexesha kwifoto?
A: Ewe, khetha ii-watermark ezikumlawuli we-watermark ngaphambi kokuba ucofe iqhosha lenkqubo.
Q: Ndiyenza njani i-watermark enemvelaphi ebonakalayo njengamagama asayinileyo ozidibanisa?
A: Ilula kakhulu kwaye nayiphi na imizobo ephakathi ye-pro iya kuyazi njani kodwa nabani na angayenza. Nazi izibini zokufundisa, 1 Tutorial kwaye 2 Tutorial.
Q: Ndinengxaki yokubhalisa. Ndingenza ntoni?
A: Ukuba unayo nayiphi na ingxaki yokubhalisa kufuneka ulandele la manyathelo:
1. Hlola IMac or Windows iphepha le-app kwisayithi yethu ukuze uqiniseke ukuba unayo ingxelo yokugqibela kwaye qiniseka ukuba ikwincwadi yakho yesicelo.
2. Cima zonke iinguqulelo ezindala.
3. Ukubhalisa i-app usebenzisa isitshixo selayisensi. Qiniseka ukuba ulandela umkhombandlela kwi-imeyile owawuyithumele emva kokuthenga usetyenziso.
4. Ukuba ufumana incoko ethi 'Ayibhaliswanga' qiniseka ukuba uyikopa kwaye uncamathisela idatha yakho yobhaliso kwi-imeyile yobhaliso esiyithumele.
5. Emva kokuchofoza kwiqhosha lokufaka isicelo sokubhalisa kuya kufuneka uyibone le nto (ngezantsi). Ngaphandle koko nxibelelana nathi ukuba unemibuzo.
QNgaba ikhona indlela yokukhupha iifoto zobungakanani obugcweleyo kunye nekhwitshi kunye neendlela zokukhupha kodwa ngaphandle kwe-watermark?
A: Ewe, kusetyenziswa I-AppleScript.Thepha eli khonkco ukuya kwisahluko se-Apple se-manyuwali kwaye ufunde impendulo yombuzo ongentla. I-AppleScript ngumhlobo wakho xa ufuna ukuzenzekelayo kwaye usebenzise iWatermark Pro ngeendlela zinoveli.
Q: Ngaba ayisiyiDigimarc eyona ndlela iphambili yabathathi benkqubela yokwenziwa kweefoto kwiifoto?
A: Amawaka amaninzi abenzi bezithombe ezinzulu abasebenzisa iWatermark. Isizathu sokuba siphuhlise iWatermark kungenxa yokuba sasinesidingo sokujonga iifoto zethu (uninzi lwethu luneefoto) kwaye sifuna into esebenza ngokulula, ngexabiso eliphantsi nangempumelelo. Siphandwe nguDigimarc kunye nezinye iindlela ezininzi ezifaka i-watermark emfanekisweni. Sifumene iDigimarc ukuxabisa amakhulu eedola ngonyaka (kwaye bahlawulisa ngokusekwe kwinani lemifanekiso) kwaye ubuchule beDigimarc abusosiphukuphuku okanye bubunyani. Ukuba ufaka idatha yakho ngendlela ethile engabonakaliyo njengeDigimarc abantu ababoni. Kukho isoftware eyenza i-watermarking ebonakalayo, njenge-iWatermark, kunye nesoftware eyenza i-watermarking efihliweyo, njenge-Digimarc. Yithi une-iPhone kwaye uyilahle epakini, kunokwenzeka ukuba uyibuyise ukuba ikrwelelwe igama kunye nefowuni yakho (iWatermark) ke ukuba ulwazi oluthile lufihliwe / lubhalwe ngokufihlakeleyo kwi-flash drive yayo (iDigimarc).
Ukujonga ezi zibakala sagqiba ekubeni iWatermark kufuneka ithi ngqo, ingabizi, isebenzise ukubonakala okubonakalayo kunye nokujonga izinto ezifihlakeleyo. Eyona ndlela isebenzayo sigqibe kwelokuba senze isoftware enokuthi ibambe inkqubo yemifanekiso engamakhulu kwaye ifake i-watermark entle (uphawu, utyikityo, ilungelo lokushicilela, nantoni na). Oku kwazisa abantu ngaphambili nangaphandle kokuvula kobunini bakho.
Ngaba banokuyisusa? Ewe, kodwa kwenzeka okufanayo kwiDigimarc. Xa ugcina umfanekiso kwi-jpg uphindaphindwa (jpg iyifomathi yoxinizelelo) iiphikseli zonke ziyaqhusheka zijikeleze kwaye zilungiswe kwakhona ngaloo ndlela ziphulukana nolwazi olungene kwi-Digimarc. Ngelishwa sisekuqaleni kwidijithali kwaye ilungelo lobunini lokushicilela aluphelelanga. Le yingxaki yeemvumi, abenzi beemovie, iifoto kunye nabaphuhlisi beesoftware. Ndenze i-google ngomxholo kwaye ndafumana eli khonkco linomdla ngumfoti othetha ngokucacileyo.
I-Digimarc ifana nokucinga ukuba ukhusela umhlaba wakho ngokungcwaba isibonakaliso sokunganiki tyala phantsi kwawo. Akukho mntu uya kuyibona kwaye baya kucinga ukuba ngumhlaba wayo kawonke-wonke kwaye banokuthi benze oko bafuna. Ayisebenzi kakhulu Inyani yile yokuba ukuyenza icace gca ipropathi yeyakho kuseyeyona ndlela ikhuselekileyo yokuzikhusela. Kungenxa yoko le nto sidale iWatermark. I-iWatermark yayilukhetho lokuqonda ukusebenzisa i-watermarking ebonakalayo engabonakali i-watermarking. Sikwafuna ukubonelela ngendlela ekulula ukuyisebenzisa, esebenzayo nengabizi kakhulu enokusetyenziswa ngumntu wonke kwaye ayiqonde.
Okokugqibela, kwanaxa iWatermark iba ngumtya wakho wokuqala wokhuselo (kulawulo lwamalungelo edijithali) akukho sizathu sokuba ungasebenzisi ezinye iindlela ezifana neDigimarc.
Q: Kutheni le nto kufuneka ndibukele imifanekiso endiyibeka kuFacebook, Twitter, Instagram, Tumblr, njl.
A: Owona mbuzo mhle! Kuba zonke ezo nkonzo zisusa imethadatha yakho kwaye akukho nto ikubambeleyo kule foto. Abantu banokutsala umfanekiso wakho kwiidesktop zabo kwaye babelane nabanye kude kungabikho nxibelelwano kuwe kwaye akukho lwazi kwifayile ethi uyidalile okanye yeyakho. I-watermark iqinisekisa ukuba wonke umntu ucacile kwinto yokuba ifoto ye-IP yakho (impahla yelungelo lokuqonda). Awusoze wazi ukuba ifoto oyithathileyo iya kuba yintsholongwane.
Q: Ndiyisebenzisa njani ifonti onayo kwinguqulo ye-iOS yeWatermark?
A: Ngoku, indlela elula kukuya nje kukufakelwa kwe-iPhoto kunye neaperture plugins kwaye ufake ezo plugins kunye nefonti ngexesha elifanayo.
Zonke ezi fonti zifumaneka kuguqulelo lwenkqubo ye-iOS enje nge-5 6, i-iOS 7 kunye ne-iOS XNUMX:
Q: Ndifumana i-watermark evela kumhlobo. Xa ndiyingenisa, ibingafani ncam neyabo?
A: Sisebenze nzima ukuqinisekisa ukuba ungathumela ngaphandle kwaye wabelane ngee-watermark kwezinye iikhompyuter kwaye zibukeka zifana kodwa umahluko ungabangelwa zezi zinto:
1. Iinkqubo ezahlukeneyo zokusebenza zenza izinto ngokwahlukileyo ngemizobo, umbala, uboniso, njl.
Iifonti ezahlukeneyo. Ukuba awunayo ngqo ifonti njengoko benzayo kuya kubakho umohluko kwinkangeleko. Isenokuba yifonti efanayo kodwa kodwa eyahlukileyo.
1.fumana umhlobo wakho ukuba akuthumelele eyona fonti.
2. Fumana isimahla okanye uthenge ifonti efanayo kwi-intanethi.
3. Qinisekisa ukuba ukhuphele ifonti kunye nesifaki se-plugin, ufake iifonti kulonto kuba zininzi iifonti ezongeziweyo ezisetyenziswa kwi-iOS nakwi-Android.
Q: Xa ndijikeleza umbhalo wam watermark 90 okanye 270 degrees, iba kancinci, incinci kakhulu. Kufana nobubanzi / ubude-iipesenti azilandeli i-angle yokujikeleza.
AEsi sisiphumo sendlela oyikhethayo yokulinganisa. Xa usenza i-watermark kumhleli we-watermark ngokuzenzekelayo isetiwe kwi-Horizontal. Ukuba ukhetha othe tyaba okanye uthe nkqo kuya kuyenza ukutsiba ijikeleze, ukuba incinci kwaye ibe nkulu, kodwa ukuba ukhetha ukungafakwanga kuya kuziphatha ngendlela eqhelekileyo. Kubalulekile ukuba uqonde ii-tradoffs zokusebenzisa okungalinganiswanga, okuthe tyaba kunye nokukala umlinganiso. Ezohwebo kunye nokuba kutheni iWatermark isebenza ngale ndlela icacisiwe Apha.
Q: Xa ndisebenzisa i-tag ngaphakathi kwe-watermark andiboni nayiphi na i-watermark ebonakalayo?
AKuya kufuneka ukuba ube nemifanekiso enalo faki ebethelelwe kubo okanye akukho nto iya kuboniswa kwifoto. Enye indlela enokuthi isebenze kukutyhala i-tag ukuba ungene kwindawo ye-ExIF / IPTC / XMP yeWatermark.
Q: Ndiyisebenzisa njani isKhangeli sam seFoto kunye neWatermark?
AI-iPhoto, iAperture, ukukhanya kwegumbi, i-Xee, iMedia, i-ACDSee, iView, iPicasa, i-QPict kunye nezinye izikhangeli zemifanekiso zinokusetyenziswa zonke nge-iWatermark Pro.
Tsala okanye ukhethe ifoto okanye ifolda kwi-iWatermark Pro kwaye emva koko uyijongele njengesiqhelo.
QNgaba iWatermark Pro isebenza nge-Aperture, iPhoto, Lightroom kunye nezinye izikhangeli zemifanekiso?
A: Ewe iyenza. Kuzo zonke ezi nkqubo kunye nezinye, isikhangeli seMedia sivumela ukufikelela okukhawulezayo nokutsala kwibrawuza yeefoto, iPhoto okanye ithala leencwadi leAperture kwiWatermark Pro. Nje ukhuphele isikhangeli seMedia kwaye ufake. Emva koko sebenzisa iWatermark Pro Imenyu yeFayile ukufikelela kwiMedia browser.
Q: I-iWatermark Pro ikhawuleza kakhulu kune-iWatermark kodwa kufuneka ndicwangcise amawaka eefoto. Ngaba unayo nayiphi na ingcebiso yokwenza isantya?
AVala ifestile yolwazi ukuba ivuliwe. Vala ipaneli yokujonga kwangaphambili ukuba ivuliwe. Igalelo kwidrive enye kunye nemveliso kwenye. Iiprosesa ezingakumbi kunye ezikhawulezayo, imemori ngakumbi kunye nokuqhuba ngokukhawuleza okufana neeflash drive okanye iRAID iqhuba lonke uncedo.
Q: Ndiyenza njani i-reseto epheleleyo yohlobo lweMac yeWatermark Pro
AYiyeka i-app ukuba ivuliwe. Bamba phantsi ulawulo, ukutshintsha kunye nezitshixo zomyalelo kwaye ucofe iapp kwakhona. Iya kuphakamisa kwaye ikubuze ukuba igcina phi i-watermark yakho eyenziweyo, isebenzise incwadi entsha kwaye uyigcine kwaye iya kuqhubeka nokuseta kwakhona usetyenziso luze lube kwimeko engasetyenziswayo (njengentsha).
QNgaba ikhona iWatermark Pro yeeWindows?
A: Ewe, kukho iiWatermark Pro zeWindows. Kukho enye yeMac. Kukho i-iWatermark + ye-iOS ne-Android.
Q: Iimpawu zamanzi zigcinwa kule ndawo ilandelayo kwiWindows
ANantsi indlela eya kudatha ye-watermark:
C: \_ Abasebenzisi \_ UmsebenzisiIgamaLesigama \_ AppData \_ Ukuzula \_ iWatermark Pro \_ ii-watermark
Q: Zigcinwa phi zonke iifayile zokhetho?
AEyona ndlela ilula yokufumana kubo kukucofa ithebhu yoPhezulu kwiwindows enkulu kwaye iqhosha leThala leeNcwadi ukuze ubone zonke iisetingi ezigcinwe kwiWatermark Pro.
okanye uhambe apha:
C: \_ Abasebenzisi \_ [umsebenzisi] \_ AppData \_ Ukuzula \_ iWatermark Pro \_
-Bonisa iThala lencwadi bonisa le folda:
Imibala yeProfayile /
Ukucofa iqhosha u-'Bonisa Backup 'kukusa apha:
C: \_ Abasebenzisi \_ [umsebenzisi] \_ AppData \_ Indawo yaseKhaya \_ iWatermark Pro \_
Esi sikhokelo siqukethe iifayile eziLondolozayo -
Iifayile zegama lokungena
Q: Kutheni le nto izinto ezikumfanekiso obonisiweyo zinombala owahlukileyo kunezinto ezikwifoto yantlandlolo?
A: Oku kunokubangelwa ngumcimbi kwiiprofayili zemibala. Iiprofayili zombala zintsokothile. Kwi-Mac, iiprofayili zoMbane zihlala zingumbandela ngaphandle kokuba uzama ukufumana into oyibonayo kwisibekweni ukuba ilingane nale uyiprintayo. KwiWindows, umbandela unokuvela rhoqo.
Vala ukukhanya kwegumbi.
Yiya kwimenyu yokuQalisa> Iphaneli yokulawula> uLawulo lweMibala.
Cofa ithebhu yezixhobo ukuba ayikhethiwe.
Ukusuka kwi pop pop-up, khetha esweni. Ukuba ngaphezulu kwe-1 esweni kuqhagamshelwe, ucinezela iqhosha lokujonga iimonitha libonisa inani elikhulu kwisikrini ukuze uchonge.
Jonga i 'Sebenzisa useto lwam kwesi sixhobo' ibhokisi yokhangelo.
Yenza inqaku leprofayili ekhethiweyo njengangoku, ephawulwe njenge (okwangoku). Ukuba akukho profayile ikhoyo, ungtsiba eli nyathelo.
Cofa kwindawo ethi Yongeza.
Kwidayalog yeProfayile yoDibaniso, khetha i-sRGB IE61966-2.1 (sRGB Umbala weMibala yendawo.icm) kwaye cinezela Kulungile.
Buyela kwidayalog Management yolawulo, khetha iprofayile ye-sRGB kwaye ucofe Cwangcisa njengoProfayile obumiselweyo, emva koko uvale incoko.
Yiya kukhetho lweNkqubo> Umboniso.
Khetha ithebhu yeMibala.
Cinezela iqhosha lokulinganisa kwaye ulandele imiyalelo.
Vula uKhetho loGcino kunye nokulinganisa kwi-gamma
Nalu ulwazi ngakumbi kwiiprofayili zemibala.
Amakhonkco omsebenzisi wokuphela kweAdobe:
Q: Ukuba umfanekiso weCMYK ukwinkqubo ye-batch, iya kutshintsha imo yemibala ibe yi-RGB?
A: Ewe iyakwenza, iWatermark okwangoku isebenza kuphela nge-RGB, ngoko iya kuvula umfanekiso weCMYK, kodwa uyiguquguqula.
Q: Yeyiphi ifomathi ye-RAW yefayile efundwa yiWatermark Pro?
AI-Apple iyaqhubeka ikhupha uhlaziyo kwi-Mac OS ukuxhasa ngcono iifomati ezahlukeneyo ze-RAW, Xa iMac OS ihlaziywa iWatermark ithatha ithuba ngokukhawuleza kwezi zihlaziyiweyo. Ulwazi ngakumbi kule Apple Tech Qaphela: http://support.apple.com/kb/HT4757
Abasebenzisi bakaWindows banokufumana iPack yeCodec Pack yeMicrosoft kunye nokuyifaka.
Umbuzo: Ngaba kufuneka ndisebenzise i-RAW ukudubula?
A: Lo ngumbuzo obalaseleyo. Kuxhomekeke kuwe nakwinto oyenzayo. Eli nqaku lenza umsebenzi olungileyo wokugubungela.
QNgaba ndingasebenzisa enye yemethadatha ukubuka ifayile?
A: Ewe, sicebisa ukuzama oko kuba kunokuba luncedo kakhulu. Yiya kwindawo ethi 'Yongeza i-watermark' yehla imenyu khetha 'Imethadata' ekhethiweyo kwenye ye-ExIF, i-IPTC okanye ezinye izinto kwaye iya kwehla kumbhalo oguqulweyo oza kufaka idatha elungileyo xa uqhubekeka.
QYintoni iXMP? Yintoni i-IPTC? Yintoni i-ExIF?
A: Bona i icandelo lesigama.
QNgaba ndingasebenzisa iWatermark kwiikhompyuter ezi-2?
A: Ewe, ukuba ukuphela komsebenzisi. Ukuba wena nomnye umntu uza kusebenzisa iWatermark kubo bobabini oomatshini ilayisensi ifuna ukuthenga enye ikopi.
Q: Ngaba ifayile enkulu ungayenza iWatermark Pro watermark?
A: Sisebenzisa i-API ye-Apple (ikhowudi yabo) ekusebenzeni kunye ne-TIFF, JPEG, njl. Njl. Ubungakanani obunokwenzeka buxhomekeke kuhlobo lwefayile. Ubungakanani be-max buya kuxhomekeka kwinani le-RAM kumatshini.
Kwi-TIFF kuya kuxhomekeka ekubeni ifayile ye-TIFF ihlala rhoqo okanye icinezelwe. Umda we-TIFF ngu-4GB ubukhulu xa ugcinwa kwidiski. Ukhetho lokunyanzelwa lunokunceda. Ubungakanani befayile> I-4 GB kunye ne-TIF iya kusilela. I-JPEG / JFIF ixhasa ubungakanani bomfanekiso obukhulu bee-pixels ezingama-65,535 × 65,535, ukuya kuthi ga kwi-4 gigapixels kumlinganiso woluhlu lwe-1: 1. Inkqubo yokujonga kuqala ye-Apple inomda wokukhuphela i-JPEG ye-30,000 × 30,000.
Ngeefayile ezinkulu kakhulu ezi ziingcebiso ezilungileyo zokukhawulezisa i-iWatermark
1. Sibonisa ukubonisa incoko yababini.
2. Vala iwindow yokujonga kwangaphambili ukuba ivulekile
3. Cima ukujonga kuqala kwimanejala yeWatermark ngokutsala istolver phezulu.
Q: Ndisebenzisa ukukhanya. Kutheni kufuneka ndisebenzise iWatermark?
A: I-iWatermark ibonelela ngezixhobo ezijongiweyo ezingafumanekiyo kwigumbi lokukhanya. Umzekelo, i-watermark yombhalo kwi-Lightroom yenye yesayizi ehleliweyo kwiiphikseli ukwenzela ukuba i-watermark ihluka ngokuxhomekeke kwisisombululo sezithombe ezihlanjulweyo. Ngelixa i-iWatermark ineewermark zewari ezithi zikhethe ngokokulingana ngokuxhomekeke kwisisombululo okanye imizobo. Igumbi lokukhanya lisebenzisa iiphikseli ukumisela indawo ye-watermark ngelixa iWatermark ibeka i-watermark ngokulinganayo isekwe kwisigqibo okanye kumzobo. Oko kuthetha ukuba watermark batch yeefoto zesisombululo ezahlukileyo kunye / okanye imbonakalo yomhlaba okanye umfanekiso we-iWatermark unokuba ne-watermark egcina inkangeleko efanayo / ifane kuzo zonke ezi ntlobo zeefoto. I-iWatermark ikwanokhetho olunokulinganisa. Oku kwa-2 umahluko omkhulu.
Q: Kwi-Mac ziphi ii-plugins, iifayile zokhetho kunye nefolda equlathe iitermark ezikhoyo?
AIindawo zazo zonke iifayile zeWatermark.
Cofa kwithebhu ethuthukisiweyo uze ucofe iqhosha elithi 'bonisa iifayile zaselayibrari' eziza kubonisa i-watermark kunye nezinye iifayile zemizobo kulowo uzifumanayo.
Cofa kwi-Advanced tab uze ucofe okanye ucofe iqhosha elithi 'Show preference' elibonisa ifayile yokhetho kulowo ufumanayo. Ukuba ufuna ukufumana ithala lencwadi elingezantsi ngokwakho uze ukhumbule ukukhetha kwi-Go Geter yemenyu ukuveza iLayibrari. I-Apple ifihla ifolda yeThala leencwadi ekusetyenzisweni jikelele.
IMacHD: Abasebenzisi: YakhoNameHere: Ithala leencwadi: Iziqulatho: com.plumamazing.iwatermarkpro: Idatha: Ithala leencwadi: Ukukhetha: com.plumamazing.iwatermarkpro.plist
Kwinguqulelo endala yeWatermark Pro <1.72
Iplagi yemifanekiso ifakwe kwi:
~ / Ithala leencwadi / Inkxaso yesicelo / iPhoto / ii plugins /
I-plugs ye-QuickLook ifakiwe ku:
/ Ithala leencwadi / iThala elikhawulezileyo (okt kubo bonke abasebenzisi-oku kufuna i-akhawunti yokulawula).
Iiplagi zeappile zifakiwe:
~ / Ithala leencwadi / Inkxaso yesicelo / iApile, isixhobo sokufaka ngaphakathi / ukuthekelisa /
~ / Ithala leencwadi / Inkxaso yesicelo / iApile, isixhobo sokufaka / Umhleli /
Ukukhuphela usetyenziso lwee-plugins kwimenyu yeWatermark Pro khetha, 'Khuphela umfakeli ukufaka i-iPhoto & iiapile zeAperture kunye neeFonti'. Okanye unokukhuphela isifaki apha:
Ezi folda zilandelayo kufuneka zivele zibekhona kodwa kufuneka zibekhona ukuze isifaki sibeke ii-iPhoto kunye neeplagi ze-Aperture:
~ / Ithala leencwadi / Inkxaso yesicelo / iApile, isixhobo sokufaka / uMhleli
~ / Ithala leencwadi / Inkxaso yesicelo / iapileure / iplagi yokubhaliweyo / ukuthunyelwa kwelinye ilizwe
~ / Ithala leencwadi / Inkxaso yesicelo / iPhoto / plugins
Ukuba isifakeli sinengxaki jonga ukuba sikhona na. Bamba iqhosha lokukhetha phantsi kwaye ukhethe imenyu yeGo ukuya kwifolda yethala leencwadi. Emva koko jonga isikhombisi seNkxaso yesicelo kwaye ukuba akakho ungazidala. Okanye ukuba uqhelene neKholera emva koko kopisha kwaye uncamathisele oku kulandelayo kwiKota:
mkdir -p ~ / Ithala leencwadi / Inkxaso yesicelo / iapile / isixhobo sokufaka / uMhleli
mkdir -p ~ / Ithala leencwadi / Inkxaso yesicelo / iapile / isixhobo sokufaka ngaphakathi / ukuthunyelwa kwelinye ilizwe
mkdir -p ~ / Ithala leencwadi / Inkxaso yesicelo / iPhoto / plugins
Kwirekhodi ezi ziiplagi ezingena kwezi folda:
iWatermarkAperture Export.ApertureExport iya kwifolda yokuthumela ngaphandle
iWatermarkAperture Stomper.ApertureEdit iya kwifolda yoMhleli
iWaterMarkFileExporter.iPhotoExporter iya kwifolda ye-iPhoto / plugins
Q: Ndiyikhupha njani iplagi.
A: Ukukhupha iiplagi ze-iWatermark kwi-iPhoto kunye neApile
1. Yeka isicelo se-iPhoto ukuba siyasebenza.
2. Kwi-Finder khetha u-Go Imenyu -> Yiya kuFolder Type ku:
Ifestile entsha yokufumana iya kuvula ikubonise incwadi yolawulo.
3. Cima "iWaterMarkFileExporter.iPhotoExporter" kwifolda ye-iPhoto plugin.
4. Qalisa iPhoto. Ukuvavanya ukhethe ifoto ukuthumela ngaphandle. Emva koko khetha:
Ifayile-> ukuthumela ngaphandle
iplagi yeWatermark kufuneka ihambile ukuze ungabe usakwazi ukukhetha iplag.
1. Yeka isicelo seApile ukuba iyasebenza.
2. Kwi-Finder khetha u-Go Imenyu -> Yiya kuhlobo lweefolda ku: ~ / Ithala leencwadi / Inkxaso yesicelo / iapileyi / iplagi yokufaka / uMhleli
3. Cima "iWatermark Stomper.ApertureEdit"
4. Kwi-Finder khetha u-Go Imenyu -> Yiya kuhlobo lweefolda ku: ~ / Ithala leencwadi / Inkxaso yesicelo / iapile / iplagi- Ins / Export
5. cima "iWatermarkApertures.ApertureExport"
Ii-watermark ezikhutshelwa ngaphandle kunye ne-imeyile okanye uzibeke kwi-PhotoNotary, Dropbox, Google Drayivu okanye iifolda zeSkyDrive ukuze zisetyenziswe kwezinye iikhompyuter. Ingasetyenziswa phakathi kweeMac ngoku ukuya kwezinye iikhompyuter kunye nezixhobo zefowuni.
I-Dropbox-Fumana iakhawunti yasimahla ene-2 ​​GB yendawo ngokucofa Apha.
Ukuqhuba kuGoogle-Fumana iakhawunti Apha I-5 GB yasimahla. Amagqabantshintshi nge-Google Drayivu Apha.
I-OneDrive-Fumana iakhawunti Apha kunye ne-7 GB yasimahla.
KwiMac xa umntu ethe wathumela (nge-imeyile okanye enye yezi nkonzo zingentla) i-watermark ethunyelwa ngaphandle yicofe kabini ukuyivula / ukuyifaka kuhlobo lwakho lweWatermark Pro yeMac.
I-watermark ethunyelwa ngaphandle ine-icon ejongeka ngoluhlobo
Ukujonga ngedijithali -Inkqubo yokungenisa ulwazi kwi-fayile yeendaba enokusetyenziselwa ukungqinisisa ubunyani bayo okanye ukufunyanwa kwayo ngabanini bayo.
I-Watermark -Imbonakalo ebonakalayo kunye / okanye engabonakaliyo yedijithali ichaza umnini wesixhobo esithile semidiya yedijithali.
I-watermark ebonakalayo yedijithali-ulwazi lubonakala kwifoto. Ngokwesiqhelo, ulwazi sisicatshulwa okanye uphawu, oluchaza umnini wesithombe. Leyo lwazi idityaniswe kwi-info info kodwa isabonakala.
I-watermark engabonakaliyo yedijithali-Ulwazi olungeniswe ngaphakathi kwedatha yomfanekiso kodwa lwenziwe ukuba lungabinakusebenza kumbono woluntu ngenxa yoko lwazi olufihliweyo. I-Steganography isebenzisa ubuchule obufanayo kodwa ngeenjongo ezahlukeneyo.
Metadata- lulwazi oluchazayo olungena ngaphakathi kulo naluphi na uhlobo lwefayile. Zonke izinto ezingezantsi kwe-ExIF, i-XMP, kunye ne-IPTC yimethadatha eyongezwa kwifoto. Imetadata ayitshintshi idatha yemifanekiso kodwa iigigsbacks kwifayile. I-Facebook, i-Flickr kunye namanye amaqonga ezentlalo akwi-intanethi asusa yonke le metadata (ExIF, XMP kunye ne-IPTC).
eXIF-I-Exif-Efomekayo yohlobo lwefayile yomfanekiso (Exif) Uhlobo lwemethadatha ephantse yonke iikhamera zedijithali ezigcinwe ngaphakathi kweefoto. I-Exif igcina ulwazi olusisigxina njengosuku kunye nexesha elithathiweyo, useto lwekhamera, i-thumbnail, iinkcazo, iGPS, kunye nelungelo lokushicilela. Le ngcaciso ayenzelwe ukuba itshintshwe kodwa inokukhethwa ngokuzithandela isuswe kwiifoto. Ukucaciswa kusetyenziswa i-JPEG ekhoyo, i-TIFF Rev. 6.0, kunye nefomathi yefayile ye-RIFF WAV, ngokongeza iithegi zemeta ezithile. Ayxhaswa kwi-JPEG 2000, PNG, okanye kwi-GIF.
IPTC- sisakhiwo sefayile kunye neseti yeempawu zemethadatha ezinokusetyenziswa kwisicatshulwa, imifanekiso, kunye nolunye uhlobo lweendaba. Yaphuhliswa yi-International Press Telecunun Council Council (IPTC) ukukhawulezisa ukuthengiselana kwamazwe eendaba phakathi kwamaphephandaba kunye neearhente zeendaba.
XMP-Lwandiso lweMetadata eyandisiweyo (XMP) luhlobo oluthile lolwimi olwandisiweyo olusetyenziswa ukugcina metadatha kwiifoto zedijithali. I-XMP iye yaxhasa i-IPTC. I-XMP yaziswa ngu-Adobe ngo-2001. I-Adobe, i-IPTC, kunye ne-IDEAlungedibene nayo ukwazisa ngo-2004 i-IPTC Core Schema yeXMP, egqithisela amaxabiso emethadatha asuka kwiintloko ze-IPTC aye kwiXMP yanamhlanje.
tag- Yisiqwenga esinye sedatha. Into nganye ngaphakathi kwe-ExIF, i-IPTC, kunye ne-XMP yithegi.
Iinxibelelaniso ezixubeneyo kunye neNkcukacha
I-OS X Lion: Iifomathi zekhamera ze-RAW ezixhaswayo
IMac OS X v10.6: Iifomathi zekhamera ye-RAW exhaswe yikhamera
Isixhobo 3: Ukuhlaziywa kwe-RAW
Isixhobo 1, 2, 3: Inkxaso yeRAW (ibonakala ifana noluhlu lwe-OS X yeNgonyama apha ngasentla)
I-iWatermark Pro ye-Mac iyakrolwa kwaye sinesichazi-magama seApplescript. Oku kuthetha ukuba ungazisebenzela indlela yeWatermark esebenza ngayo. Ngoku i-iWatermark inabasebenzisi abanobuchule (wena) unokwenza izikripthi ukwenza iWatermark isebenze kunye nezinye ii -apps ozisebenzisayo. Apha ngezantsi kukho iApplecript elula enokungalungelanga iluncedo kwimisebenzi yemini kodwa ibonisa indlela yokubhrawuza iWatermark.
Nceda uqonde ukuba asinakukunceda ukuba wenze ii-AppleScriptts.Singaqeshwa ngeyure ukuba unayo into ofuna ukuyenza kwaye awufuni kuyenza ngokwakho. Qhagamshelana nathi. Kodwa iAppleScript ilula ukuyifunda kwaye imnandi. Qala ngento elula kwaye yakha ukusuka apho.
Umzekelo Izibhalo zeWatermark Pro
Isikhokelo soLwimi lwe-Applescript e-Apple
Nceda usithumele izikripthi ozenzayo nokuba zilula kakhulu ukuze sabelane nabanye.
A: Ewe. Thepha ngentla kwiMizekelo yeeSicatshulwa ukuze ukhuphele emva koko ukhethe i-AppleScript enkulu + izithonjana.applescript. Iinkcukacha ezithe kratya kwinto esenziwa siskripthi kunye nendlela esebenza ngayo apha ngezantsi.
Yenza ubungakanani kwakhona bomfanekiso kwiisayizi ezimbini ezikhulu umfanekiso 1024 x 768 ngemethadata kunye ne-256 x 256 (ngaphandle kwemethadatha) efakwe kuqala "ngesithupha_" Thatha useto lolunye useto lweWatermark Pro ngendlela othanda ngayo (okt): -Efomatha kwakhona imveliso Igama kufuneka lisebenzise i-tag "Prefix". Sibeka isimaphambili ukuba sibe ngu- "thumb _" - iifayile zokhetho ezikhethiweyo, - i-watermark yokusebenzisa, -Ifomathi yokukhuphela- kunye nokukhetha akubhalwanga ngezantsi: Isikripthi sitshintsha umgangatho weJPG ube yimifanekiso engama-85. Iskripthi sitshintsha umgangatho weJPG ube ngama-65 kwimifanekiso enika umfanekisoOmveliso ifakwe kwiifolda zeFlat. Iqamba isimaphambili kwi "Thumb_" Iskripthi sinokuvula / ukucima i-watermarking ngokusekwe kunkulu okanye kwi-thumbnail kwaye kwakhona ... Vula Gcina iMethadata kwaye ususe idatha ye-GPS (indawo ye-GEO) yemifanekiso enkulu. Cima Gcina iMethadata kwaye ususe idatha yeGPS isekhona kwimifanekiso ye-thumbnail. Cwangcisa i-DPI yemifanekiso enkulu ukuba ibonise i-dpi engama-300 kwidpi ye-icon ukuya kwi-72 dpi
Ulwazi olukhethekileyo lweWindows Windows
Ukwenza cwaka cofa umgca wokuyalela i-1.1.3 isifaki yile:
iWatermarkPro.win.x86x64.1.1.2.exe [/ faka | / khipha] [/ cwaka] [/ log]
Ukubona uncedo lweempikiswano zomgca wokuyalela
Zininzi izinto ezikhoyo onokukhetha kuzo ezinokunceda kodwa ezi ngxoxo zilandelayo ziyaxhaswa kwaye ziyavavanywa.
Nceda ujonge apha ngezantsi malunga nenkxaso kwiWatermark.
Phinda ubuyisele inombolo ye-serial
Inani le-serial ye-iWatermark kunye ne-iWatermark Pro yahlukile. Ukuba ungumnini weWatermark kwaye ufuna ukuphucula nceda uqhakamshelane nathi kwaye usazise i-imeyile kunye negama oye walithumela phantsi kwalo.
Siyakuvuyela ukuva kuwe.
Abantu basePlum emangalisayo
Iindaba kunye nokunye (okungahambelaniyo)
Imveliso (x) yongezwa kwinqwelo → ×